Myanmar 18 Plus: သင်းသင်းမွှေးမွှေး နှင်းဖွေးဖွေး - (၁)
သင်းသင်းမွှေးမွှေး နှင်းဖွေးဖွေး - (၁)
ဆောင်းဦးပေါက်ရာသီ… ညနေ ၅ နာရီလောက် ဆိုလျှင်ပင် နေရောင်က ကုန်ချင်ချင် ဖြစ်လာ၏။ သည်ကနေ့လူက နေလို့ ထိုင်လို့သိပ်မကောင်းချင်.. အိမ်ရှေ့ ရှိဒန်းကလေးတွင် ထိုင်ရင်း ခင်ပွန်းဖြစ်သူ အလုပ်မှ ပြန်လာမည့်လမ်းကို မျှော်နေမိသည်။ တွဲလောင်းချထားသော ခြေထောက်လေးများကို ငုံ့ ကြည့်ကာ သက်ပြင်းချမိ၏။ ယောင်မို့ မို့ဖြစ်နေသော ခြေချောင်း လေးများက ဖိနပ်ပင် စီးလို့မရချင်။ သည်အချိန် သည်သို့ ပဲ ဖြစ်တတ်သည်ဟုတော့ ပြောကြသား.. သို့ သော် ခိုင့်စိတ်ထဲ ကသိကအောင့် ဖြစ်နေမိသည်။ ၀မ်းကြာတိုက် အတွင်းမှ သမီးငယ်နှစ်ဦး လူ့ လောကသို့အောင်မြင်ချောမောစွာ အမြန်ဆုံးရောက်လာရေး မျှော်လင့်နေမိ၏။ ချစ်ရသူ မောင် နှင့် လက်ထပ်ပြီး ဘ၀ရှေ့ ရေးအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ နှစ်ဦးသဘောတူ ဆုံးဖြတ် ပြင်ဆင်နေကြ၍ ချက်ချင်း သားသမီး မယူဖြစ်ခဲ့။ နှစ်ဘက်မိဘများကလည်း သာမာန် လူတန်းစားများသာ ဖြစ်သောကြောင့် ခိုင်တို့နှစ်ဦး ဘ၀ တစ်ခုကို ကိုယ့်အား ကိုယ်ကိုးကာ ထူထောင် ခဲ့ကြသည်။ လူလားမြောက်အောင် ကျွေးမွေးပြုစုကာ ဆုံးခန်းတိုင် ပညာသင်ပေးခဲ့ပြီးသော မိဘနှစ်ပါးကို မိမိတို့အိမ်ထောင်ရက်သား ကျသည်အထိ တာဝန် မပိုစေလိုပါ။ ခိုင်တို့လက်ထပ်ကြတော့ နှစ်ဦးလုံးက အသက် (၂၅) နှစ် အရွယ်.. ကြိုးစား ရုန်းကန်နိုင်သော အရွယ် ကောင်းမို့နှစ်ဦးလုံး အလုပ်ကိုယ်စီလုပ်ကာ အတန်အသင့်သော လူနေမှု အဆင့် တစ်ခု ရောက်အောင် ကြိုးစား အားထုတ်ခဲ့ကြ၏။ ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးလုံး တက်ညီလက်ညီ ကြိုးစား ခဲ့ကြ၍ ယခုဆိုလျှင် လူနေသန့် သော ဆင်ခြေဖုံး ရပ်ကွက်လေးတွင် ကိုယ်ပိုင် ပျဉ်ထောင် သွပ်မိုးအိမ် ကလေးနှင့် သပ်သပ်ရပ်ရပ်ကလေး နေထိုင်နိုင်ခဲ့ပြီ။ ထိုက်သင့်သော
လူနေမှု အဆင့်ကလေးရလာတော့ နှစ်ဦးသား မိသားစု ဘ၀လေးကို တောင့်တ လာမိ၏။ မွေးချင်းရင်းချာ မရှိသော မောင် က သားသမီးတွေ အများကြီးနှင့် မိသားစု အကြီးကြီး ဘ၀ကို ခုံမင်သည်။ ခိုင် ကိုယ်တိုင်ကလည်း မိမိအတွက် အားကိုးအားထားပြုရမည့် သမီးလေး တစ်ယောက်လောက် လိုချင်မိ၏။ လက်ထပ်ပြီး (၂) နှစ် အကြာတွင် သမီး အမြွှာလေး နှစ်ယောက်ကို ခိုင် ကိုယ်ဝန် ဆောင်ခဲ့သည်။ ကံတရားက ခိုင်တို့ ဇနီးမောင်နှံ အတွက် ချစ်စရာ လက်ဆောင်ပေးခဲ့၏။ အိမ်ထောင်ကျကာစ က သားသမီး စီမံကိန်းကို အကောင်အထည် မဖော်နိုင် သေးသောကြောင့် သားဆက်ခြား ကိုယ်ဝန်တားဆေးများ ခိုင် သုံးခဲ့ရသည်။ တကယ်တမ်း ကလေး လိုချင်လာတော့ သည်ဆေးများကြောင့် အနှောက်အယှက်ဖြစ်မည်ကိုပင် ကြံဖန်တွေးကာ ပူပင် မိရသေး၏။
မောင့် ကိုမျှော်ရင်း လွန်ခဲသော အချိန်ကာလ တို့ကို ခိုင် ပြန်မြင်ယောင်မိသည်။ ချစ်သူဘ၀ ကတည်းက “လက်ထပ်ပြီးရင် ကလေးတွေ အများကြီး မွေးမယ်..” ဟုကြုံးဝါးတတ်သော မောင်..။ ခိုင်တို့လက်ထပ်ခါနီး တစ်ပါတ်လောက် အလိုတွင် ခိုင်က လောလောဆယ် ကလေးမယူကြသေးရန် ဆွေးနွေးမိတော့ မောင် စိတ်ဆိုးသေးသည်။ သည်ဘက် ခေတ်မှာက ချစ်သူနှစ်ဦး တရားဝင် လက်ထပ် ကြသည်မှာ သားသမီး မွေးဖွားဘို့ဆုံးဖြတ်သည်နှင့် တူတူပင် မဟုတ်ပါလား။ ခိုင် ကလည်း အခြေခိုင်သော ဘ၀လေး တစ်ခု ထူတောင်ပြီးမှ သားသမီး ယူလိုသည်။ မိမိ ရင်သွေးကို ချမ်းချမ်းသာသာ မဟုတ်တောင် ပြည့်စုံသော ဘ၀လေးတော့ ပေးချင်မိ၏။ ခိုင့် သဘောထားကို မောင် နားလည် လက်ခံလာအောင် မနည်းပြောယူခဲ့ရသည်။ အချိန်ကာလတို့ ကို ကြိုးစားမှု ဖြင့် ဖြတ်ကျော်ရင်း သည်နေ့ သည်အချိန်တွင်မတော့ မောင် လိုချင်သော သမီးလေး ကို နှစ်ယောက် တပြိုင်နက် မွေးပေးနိုင်တော့မည်မို့ခိုင် ကျေနပ် ပျော်ရွှင်မိသည်အမှန်ပင်။ သားဦး ကိုယ်ဝန် ဖြစ်ရသည်အထဲ အမြွှာ ဆိုတော့ ခိုင် အင်မတန် ပင်ပန်းလှပါသည်။ သို့ သော် ကျန်းမာရေးကောင်းပြီး ခွန်အားပြည့်ဝသော အရွယ်မို့ခံနိုင်ရည် အပြည့်ရှိပါ၏။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရန် ဆုံးဖြတ်စဉ် ထိုးခဲ့သောက်ခဲ့ဘူးသော တားဆေးများ ကြောင့် မရသေးသည့် ကလေးကို စိတ်ပူကာ မောင့်ခမျာ တစ်လခန့်အချစ်ငတ်ခဲ့သေး၏။ ပြန်တွေးတော့ ရယ်ချင်မိသည်။ “ဆေးတွေရဲ့ အရှိန်ကုန်သွားအောင် တစ်လလောက် မောင် ထိန်းလိုက်မယ်လေ..ခိုင်” ကြံကြံဖန်ဖန် တွေးပူရှာသော မောင့် ၏ ဖခင်စိတ်ဓါတ်ကို ခိုင် မလေးစားဘဲ မနေနိုင်ပါ။ ထိုအချိန် ကာလက မောင့် ရင်ထဲမှ တလိပ်လိပ် တက်နေသော သွေးသား ဆန္ဒ၏ ဒီရေတို့ ကို ခိုင့် လက်မှု အနုပညာနှင့်သာ ဖြေဖျောက်ပေးခဲ့ရ၏။ကိုယ်ဝန်
ဆောင်လာပြန်တော့လည်း စိတ်ပူတတ်သော မောင့်ခမျာ ကလေး ထိခိုက်မည် စိုးသောကြောင့် ဟူသော အတွေးဖြင့် အံကျိတ်ရရှာပြန်သေးသည်။ ခိုင်လည်း အလိုက်တသိပင် တတ်စွမ်းသလာက် မောင့်ကို ပြုစုခဲ့ပါ၏။ နောက်ပိုင်းတော့ ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာ စာအုပ်များ၏ ကျေးဇူးကြောင့် ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် လိင်ဆက်ဆံမှု ပြုခြင်းသည် အထူးထူးသော ပြဿ နာ မရှိလှကြောင်း သိခွင့်ရသဖြင့်
ခိုင် တို့ အတွဲ မရဲတရဲဖြင့် ကဲခဲ့ကြသေးသည်။ ညင်သာနူး ညံ့သော ထိတွေ့ ဆက်ဆံမှုလေးများဖြင့် မောင့် စိတ်အာသာကို အထိုက်အလျောက် ခိုင် လိုက်လျော ပေးနိုင်ခဲ့၏။ ခိုင့် အပေါ် အမြဲ ညှာတာခဲ့သော မောင် ကလည်း တတ်နိုင်သလောက်တော့ ထိန်း ရှာပါသည်။ သားဖွားမီးယပ် ဆရာဝန်ထံတွင် ကိုယ်ဝန်စောင့်ရှောက်ရန် အပ်နှံပြီး အမြွှာ သန္ဓေ မှန်း သိရတော့ မောင့် ခမျာ ပျော်လိုက်သည့် ဖြစ်ခြင်း။ “ကလေးမွေးဘို့ကပ်စီးနဲတဲ့ ငါ့မိန်းမ.. တစ်ပြိုင်တည်း (၂) ယောက်.. ကောင်းမှ ကောင်းကွာ…” ဟု အားပါးတရ ကျုံးဝါးလေတော့၏။ အသိ မိတ်ဆွေများ ထံတွင်လည်း ကြွားလိုက်ရသည်မှာ အမော။ ရင်းနှီးသူများက “ကိုဇာနည် တို့ များ အားကောင်းတဲ့ နေရာမှာ တစ်ကြိမ်တည်း (၂) ဂိုး သွင်းတော့တာပဲ…” ဟု ပြောကြလျှင် ခိုင်က ရှက်သွေးတွေ ဖြာရသလောက် မောင် တစ်ယောက်ကတော့ဖြင့် ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားကာ ကော်လာ ကလေးပင် ထောင်ပြလိုက်သေး၏။ မောင့် ဆန္ဒက ခွဲစိတ်မွေးဖွားရန် အတန်တန်ပြောသော်လည်း ခိုင်ကတော့ ဆရာဝန်နှင့် တိုင်ပင်ကာ မိမိခွန်အားဖြင့် ရိုးရိုးမွေးဖွားရန်သာ
ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ပင်ကိုယ် ကျန်းမာရေးကောင်းပြီး ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် စနစ်ကျသော စားသောက် နေထိုင်မှု များကြောင့် အထူးတလည် စိတ်ပူစရာ မရှိလှပါ။ ခိုင့်
ဆုံးဖြတ်ချက်ကို မကျေနပ်ချင်သော မောင့်ကိုတော့ ခိုင် ချော့ ရသည်ပေါ့။ “ဗိုက်ကြီးကို ဓါးကြီးနဲ့ခွဲမှာမောင်ရယ်.. ခိုင် တွေးမိတိုင်း ကြောက်လို့ ပါ… ဒါလေးတစ်ခုတော့ ခိုင့် ကို အလိုလိုက်ပေးပါ မောင်ရယ်.. နော်..” ခိုင်သည်သို့ပြောတိုင်း မောင်က မကျေမနပ် လေသံဖြင့် “ဘာလေး တစ်ခုကကော ခင်ဗျားသဘော မဖြစ်လို့ တုန်း ဒေါ်မိမိခိုင်…” ဟု အငေါ်တူးတတ်သည်။ အမှန်တော့ ခိုင် စိတ်ပူမိတာက ငွေးကြေး အခြေအနေကိုပါ။ မိမိတို့ မှာက မခက်ခဲသည်သာ ရှိတာ.. သိပ်ကြီး အလျှံအပယ် အခြေအနေမှ မဟုတ်ဘဲလေ။ ခွဲစိတ်မွေးဖွားမှု ကုန်ကျစရိတ်ကို ခိုင် ထည့်တွေးသည်။ မတော်လို့ များ မိမိတို့ လက်ထဲတွင် ရှိသော ငွေပမာဏနှင့် မလုံလောက်ခဲ့ပါလျှင်။ မိမိရင်သွေးများကိုတော့ လူ့ လောကထဲကို အကြွေးနှင့် ၀င်မလာစေ့ချင်ပါ။ အမေတစ်ယောက်ရယ်လို့ဖြစ်လာမှတော့
သားသမီးကို ကိုယ့်ခွန်အားနဲ့မွေးထုတ်ဘို့မဖြစ်မနေ သတ္တိ ရှိရမည် မဟုတ်ပါလားနော်။ နောက်တစ်ခု ခိုင်တွေးတာက ဗိုက်ခွဲမွေးဖွားလျှင် တစ်လ ခန့် အေးအေးဆေးဆေး အနားယူ ရသည်တဲ့။ ခိုင်တို့အခြေအနေက သည်သို့သက်တောင့်သက်သာ နားနေဘို့ထင်သလောက် မလွယ်ပါ။ အရင်ဆုံး မီးဖွားပြီးလျှင် ခိုင် အလုပ်ထွက်ရမည်။ ၀င်ငွေတစ်ရပ် လျော့သည့် အပြင် တိုးလာမည့် စားပေါက်က (၂) ခု။ ကျန်းမာရေးစရိတ် ဆိုတာက ထည့်တွက်ရဦးမည်။ သည်လို့အခြေအနေတွင် မောင့်တစ်ယောက်တည်း ၀င်ငွေဖြင့် အိမ်တွင် လူပိုခေါ်ထားရန် မလွယ်ပါ။ သည်တော့ “ရိုးရိုးမွေးတာက မွေးနေတုန်းသာ နာတာ.. ပြီးသွားတော့ ချက်ချင်း အလုပ်ဆင်းလို့တောင် ရပါတယ်အေ..” ဟူသော မေမေ့စကားကို ခိုင် အပြည့်အ၀ ယုံကြည်ကာ လိုက်နာ တော့သည်ပေါ့။ ခိုင့်သဘောထားကို ဆရာဝန်ထံတွင် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောပြတော့ သဘော ကောင်းသော ဆရာကြီးက ခိုင့်ကို အားပေးပါသည်။ “ဒါပေါ့ သမီးရယ်.. အမေဆိုတာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ သတ္တိ အကောင်းဆုံး သူရဲကောင်းပဲ.. ညည်းက ပင်ကိုယ်လည်း ကျန်းမာ.. ကလေးတွေ အနေ အထားကလည်း အကုန်ကောင်းနေတယ်.. အရေးအကြီးဆုံးက မိခင်ရဲ့ စိတ်ဓါတ်ပဲသမီး.. ညည်း ရိုးရိုးမွေးလို့ ရတယ်.. ဘာအခက်အခဲမှ ရှိမလာနိုင်ဘူး.. ဆရာကြီး တစ်ယောက်လုံးရှိတယ်..” ဟု ကြင်နာစွာ အားပေးပါသည်။ ဆရာကြီး ကိုယ်တိုင် ကလည်း
မလိုအပ်ပဲ ခွဲစိတ်မွေးဖွားခြင်းကို မကြိုက်သူပင်။ ဤသို့ ဖြင့် မောင့်၏ ခွဲစိတ် မွေးဖွားရေး အစီအစဉ်ကို ခိုင်က ကာယကံရှင် ဟူသော အာဏာပါဝါ အပြည့်သုံးကာ ဆန့် ကျင် ခဲ့တော့၏။ သမီးလေးများကလည်း အရပ်စကားဖြင့် ပြောရလျှင် သန္ဓေ ကောင်းသည် ဆိုရမည်။ ကိုယ်ဝန် စ တင် ဆောင်ချိန်မှ စ၍ ယနေ့နေ့ စေ့လစေ့ အချိန် ရောက်သည်အထိ သူများတွေလို အစားအသောက်လည်း မပျက်.. မူးတာတွေ အန်တာတွေလည်း မရှိ။ သူငယ်ချင်းများကပင် “နင့် ဟာက ကိုယ်ဝန်ကောဟုတ်ရဲ့လား မိခိုင်ရယ်.. နင် အစား သောင်းကျန်း လွန်ပြီး ဗိုက်ကြီး ပူလာတာများလား…” ဟုပင် နောက်ကြသေးသည်။
ကိုယ်ဝန် (၅) လကျော်ထိ ခိုင် အလုပ်ဆက်လုပ်ဖြစ်သေးသည်။ သည့်နောက်တော့ မောင်က
အိမ်ဦးနတ်တို့ ၏ ပါဝါ သုံးကာ ခိုင့်ကို အလုပ်မှ အနားယူစေတော့၏။ သားဦးကိုယ်ဝန် ဆိုပေမယ့် အမွှာဆိုတော့ ဗိုက်ကထွက်လွန်းသည်လေ။ လမ်းလျှောက်လျှင်ပင် လူက ပက်လက် လန်နေသလိုလို။ ခိုင့် အတွက်တော့ သိပ်ကြီး စိတ်အနှောက်ယှက် မဖြစ်လှပါ။ တစ်နေ့ တစ်ခြား ဖွံ့ ဖြိုးလာသော သမီးလေးတို့ ကို ပွေ့ လွယ်ရင်း ခိုင် ပျော်မိပါသည်။ သမီးလေးတို့ခိုင့် ဗိုက်ကို တိုးလှုပ်သည့် အခိုက်များတွင် ခံစားရသော ကြည်နူးမှုက ဘာနှင့်မျှ မတူပါ။ သူတို
့လေးတွေကို မှန်းကာ ဗိုက်ကို ပွတ်သပ်ချော့မြှူရင်း စိတ်ထဲမှ စကားများ ပြောမိသေးသည်။ သမီးလှလှလေးများ မွေးအောင် မဆီမဆိုင် အိမ်နေရင်း အလှပြင်ရသည်မှာလည်း အမောပင်။ မောင်ကတော့ ပြောရှာပါသည်။ မိန်းမသား တစ်ယောက်တွင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်သည် အလှဆုံးတဲ့လေ။ မောင် အလုပ်သွားချိန် အိမ်တွင် တစ်ယောက်တည်း ကျန်နေချိန်များတွင် ကလေးသီချင်း စီဒီခွေကလေးများ ဖွင့်ကာ သီချင်းများ ကျက်ရသေးသည်။ ကိုယ်ဝန် (၈)လ ကျော်လာတော့ မောင့် အစီအစဉ်ဖြင့် ဆွေနီးမျိုးစပ်ဖြစ်သူ ခိုင့် အဒေါ်တစ်ဦးကို အိမ်တွင်လာနေစေသည်။ အသက် (၄၀)ကျော်အရွယ် တစ်ကိုယ်ရေ တစ်ကာယသမား ဖြစ်သောဒေါ်လေးက ခိုင့်အတွက် အားကိုးစရာ အဖော်ကောင်း ဖြစ်ခဲ့ ပါသည်။ ခိုင့်အတွက် ပိုမို အဆင်ပြေစေသည်မှာ ဒေါ်လေးက သူမ နေထိုင်ခဲ့သော နယ်မှ ရွာကလေးတွင် အရံသားဖွား သင်တန်းတက်ခဲ့ဖူးသူ။ သို့ ဖြစ်၍ ကိုယ်ဝန်ကို စနစ်တကျ စောင့်ရှောက် တတ်ရန် ဒေါ်လေးထံမှ အကူအညီကောင်းများ ခိုင်ရခဲ့သည်။ ပင်ကိုယ် သတ္တိကောင်းသော ခိုင်ကတော့ သမီးလေးများ အတွက် အစစ အရာရာ အဆင်သင့် ဖြစ်နေပါသော်လည်း စိုးရိမ် ကြီးတတ်လွန်းသော မောင့်ခမျာ အင်္ဂုလိမာလ သုတ်တော်ကို ခိုင့် သက်စေ့ နေ့ စဉ်ရွတ်ဖတ်ကာ ခိုင့် ကို အရိပ်တကြည့်ကြည့်ပေါ့။ ကျန်တာတွေ သိပ်မသိသော်လည်း ယခုလို ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်တွင် မောင့်ကို အရင်ကထက် ပို၍ အနိုင်ကျင့်လို့ကောင်းသည်ကတော့ အမှန်ပင်။ ဒေါ်လေး ရောက်မလာခင်အထိ ခိုင့် ဝေယျာဝစ္စအ၀၀ တို့ က
မောင့်တာဝန်။ အစားအသောက် အနေအထိုင်နှင့် ပတ်သက်လျှင်တော့ အနည်းငယ် ချုပ်ချယ်ခြင်း ခံရသည်။ ရေခဲရေသောက်လျှင် ကလေးများ မိတ်တွေပေါက်လာမည်၊ အစပ်စားလျှင် ကလေးများ ဆံပင်မသန်ဘဲနေမည်၊ ညနေစောင်းရေချိုးလျှင် ကလေး ရေမွန်းတတ်သည် စသည်ဖြင့် ဘယ်ကဘယ်လို လေ့လာထားသည် မပြောတတ်သော ဗဟုသုတ တစ်ပုံတစ်ပင်နှင့် ခိုင့်ကို စည်းကမ်းချက်များ ထုတ်သေး၏။ မောင့်ကို ကျီစယ်ချင်၍ ထိုစည်းကမ်းများကို ခိုင် ချိုးဖောက်သည့်အခါ အမှန်တကယ်ပင် စိတ်ဆိုးမာန်ဆိုးဖြင့် ဆူပူ တတ်သေးသည်။ ထိုအခါမျိုးတွင် ခိုင်က ၀မ်းနည်းစိတ်ကောက်.. မောင်က ပြန်ချော့.. ဤသို့ ဖြင့် ခိုင်တို့ဘ၀လေးသည် သာယာကြည်နူးမှု အပြည့်ဖြင့် လှပ ချိုမြိန်ခဲ့ပါသည်။ဒေါ်လေးရောက်လာတော့
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့် ပတ်သက်သော ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များ၊ မွေးကင်းစ ကလေးတို့ ၏ သဘာဝများကို ခိုင်သင်ယူခွင့် ရခဲ့ပါသည်။ လက်တွေ့အားဖြင့် အတွေ့ အကြုံ သိပ်ကြီး မများလှသော်လည်း စနစ်တကျ သင်ယူဘူးသူမို့ဒေါ်လေး၏ ဗဟုသုတတို့ က ခိုင့်အတွက် များစွာ အထောက်အကူ ဖြစ်ခဲ့သည်။ နယ်တွင် နေခဲ့သော ဒေါ်လေးက အသက် (၅၀) နားနီးနေသော်လည်း ကျန်းမာရေးကောင်းလှ၏။ ကလေးမီးဖွားခြင်းနှင့် ပါတ်သက်၍ မြန်မာ့ ရိုးရာ ဓလေ့စရိုက်တို့ ကိုလည်း ခိုင် သိခွင့်ရလိုက်သည်။ အထူးသဖြင့် ဗေဒင် ၀ါသနာကြီးသော ဒေါ်လေးနှင့် ခိုင် အမြဲတွက်ချက် ဖြစ်သည်က မွေးလာမည့် သမီးလေးများ ဘယ်နေ့ ဘယ်ရက်ဆိုလျှင် ဘာဇာတာ.. စသည်ဖြင့်ပေါ့။ ဒေါ်လေးက “သားဦးစနေ၊ မီးလို မွှေ…” ဟူသော ရှေးအယူအဆ နည်းနည်းကြီးသည်။ “စနေနေ
့ ဗိုက်နာရင်တော့ အောင့်သာထား ခိုင်ရေ…” ဟု မကြာခဏ ပြောတတ်၏။ ယခုဆိုလျှင်
ခိုင့် အတွက် ဆရာဝန်ကြီး ခန့် မှန်းသတ်မှတ်ပေးထားသော ရက်စွဲက (၃) ရက်တိတိ ကျော်နေပြီ။ “မိန်းကလေးဆိုလျှင် စောမွေးတတ်တယ်..” ဟု ပြောလေ့ရှိသော ဒေါ်လေးကို ခိုင် ရယ်မိတော့ စကားကြွယ်သော ဒေါ်လေးက “နင့် သမီးတွေ ယောင်္ကျားလျှာ ဖြစ်နေလို့နေမှာပေါ့..” ဟု ကြံကြံဖန်ဖန် ပြန်ပြောတော့သည်။ လိုအပ်လျှင် ချက်ချင်း ဆေးရုံသို့သွားနိုင်ရန် အဆင်သင့် ပြင်ဆင်ကာ မိခင်လောင်းတို့ ၏ သတ္တိကို ပြရမည့်နေ့ ကိုစောင့်စားရင်း ခိုင့်ရင်တွေ ခုန်နေမိသည် အမှန်ပင်။ ယခုနောက်ပိုင်း ညဘက်တွေ သိပ် အိပ်မပျော်တော့။ အထိုင်အထ လည်း တစ်နေ့ တစ်ခြား ခက်လာကာ ခြေထောက်လေးများ ယောင်နေသည်။ ဒေါ်လေးက
ခိုင့် ခြေထောက်များကို တောင်နံကြီး သနပ်ခါးလေး မှန်မှန် သွေးလူးပေးလျှက် “အဲ့ဒါ ဖြစ်နေကျ သဘာဝပဲ ခိုင်.. သားဆိပ်တက်တာလို့ခေါ်ကြတယ်.. မွေးခါနီးဆို
ပိုဆိုးတယ်.. တချို့ဗမာ အယူအဆကျတော့ အဲ့လို ခြေထောက်တွေ ယောင်တာ (၃) ခါပြည့်ရင် မွေးရောတဲ့..” ဟု စိတ်ရှည် လက်ရှည် ရှင်းပြပါသည်။
ညနေ (၅) နာရီခွဲပြီ.. ခြံဝမှ တံခါးသံကြိုးဖွင့်သံ ကြားလိုက်ရ၏။ မောင်ပြန်လာပြီ။ လက်ထဲတွင် စားစရာ တစ်ပုံနှင့်ပေါ့။ မောင့်ကို ထကြိုလိုက်တော့ ထုံးစံအတိုင်း မောင်က ခိုင့်နှဖူးပြင်ကို အနမ်းလေး ပေးကာ “သမီးတို့ မေမေနေကောင်းရဲ့လား…” ဟုမေးသည်။ “ဒီနေ့ နေရတာ တစ်မျိုးကြီးပဲမောင်ရယ်.. ညနေစောင်းကတည်းက ရင်ပြည့်နေသလိုလို.. ဗိုက်ထဲလည်း
နည်းနည်း ရစ်တစ်တစ်နဲ့ .. အိမ်သာ သွားတော့လည်း ၀မ်းသွားတာ မဟုတ်ပြန်ဘူး….” မောင်ရုတ်တရက် ခြေလှမ်း တုန့် သွားပြီး “ဗိုက်နာချင်တာများလား ခိုင်…. ဒေါ်လေးကိုပြောသေးလား…”“ဟင့်အင်း မပြောမိဘူးမောင်…”“အာ…
ပြောရမှာလေ ခိုင်ရယ်… နေပါဦး ခုကော အိမ်သာသွားချင်နေသေးလား… ဘယ်နှမိနစ်ခြား တစ်ခါလောက် အဲ့လို ဖြစ်နေတာလည်း… ဒါမှ မဟုတ် တစ်ချိန်လုံး နာနေတာ မျိုးလား ...”“ဟင့်အင်း.. သေချာတော့ သတိမထားမိဘူး…”“ကောင်းရော… ထမင်းကော စားပြီးပြီလား… မစားရသေးဘူး ဟုတ်….”“မောင်ကလည်း ခိုင်ဘယ်တုန်းက မောင်မရောက်သေးဘဲ စားနှင့်ဘူးလို့ လည်း.. အဆန်းလုပ်ပြီး မေးနေတယ် ….”“ဟုတ်ပါပြီ မဖုရားရယ်… ခုတော့ မြန်မြန်လေး ထမင်းစားရအောင်.. မတော် ဒီည ဗိုက်နာနေရင် ဘယ်လို လုပ်မလဲ….”အိမ်ထဲရောက်တော့
မောင် ရေချိုးတုန်း ထမင်းပွဲပြင်ရင်း ဒေါ်လေးကို ပြောပြလိုက်သည်။ ဒေါ်လေးက ခိုင့်ကို အိပ်ယာပေါ်တွင်လှဲစေကာ အနည်းငယ်စမ်းသပ်ပြီး... “ဟုတ်တယ် ခိုင်… ညည်း ဗိုက်နာ ချင်နေတာ.. စောစောစီးစီး မပြောဘူးအေ… ထမင်းစားပြီး ဆေးရုံသွားကြရင်ကောင်းမယ်.. တော်ကြာ ညနက်မှ ဆိုရင် ကားငှားဘို့ပြုဘို့ခက်နေလိမ့်မယ်…” ဒေါ်လေး အပြောကြောင့် ခိုင် ရင်ခုန်ကာ ယခုမှ ပင် အမှန်တကယ် ဗိုက်နာလာတော့သလိုလို… ပေါင်ရင်းများနှင့် ခါးစပ်မှ ဆစ်ကနဲ နာကျင်မှုကို ခံစားလိုက်ရသည်။ ဆက်တိုက်ကြီးတော့ မဟုတ်။ မျှော်လင့်စောင့်စားနေသော အတွေ့ အကြုံသစ်အတွက် ခိုင်ရင်တွေ ခုန်လာမိသည်။ ခိုင့်ထက် စီနီယာကျသော သူငယ်ချင်း
တွေကတော့ ပြောဘူးကြသည်။ “ကလေးမွေးရင် ဗိုက်နာတယ်လို့ သာ ပြောကြတာ… တကယ်တမ်းက ခါးတွေ ပေါင်ရင်းတွေက နာတာပါအေ…” “ရုပ်ရှင်ထဲက
မင်းသမီးတွေ နာပြသလိုလည်း မဟုတ်ပေါင်… သူတို့ လောက် ကလေးသာ ဆိုလို့ ကတော့ ငါတို့များ တစ်နှစ်တစ်ယောက်နှုန်း မွေးလိုက်ချင်စမ်းတယ်…” ထမင်းစားနေရင်း
ခိုင် အနာ နည်းနည်း စိပ်လာ၏။ ထမင်းလည်း ဆက်စား၍ မ၀င်တော့။ မောင့်ကိုပြောပြပြီး ဆေးရုံသွားဘို့ချက်ချင်း စီစဉ်ရတော့သည်။ နယ်မှ ခိုင့် မိဘများထံကိုတော့ မနက်မှပဲ အကြောင်းကြားနိုင်တော့မည်။ ဒေါ်လေး ခန့် မှန်းချက် အရတော့ ညသန်းခေါင် ၀န်းကျင်များ မွေးလေမလား..။ သည်နေ့ က သောကြာနေ့ ဆိုတော့ အကယ်၍ သန်းခေါင်ကျော်သွားလျှင် စနေ သမီးတွေ ဖြစ်ပြီပေါ့။
ခိုင်ကြားဖူးတာတော့ ကလေးမွေးရန် ဗိုက်နာချိန်က လူတိုင်းနီးပါး အနည်းဆုံး တစ်ည (သို့ မဟုတ်) တစ်ရက်တော့ ကြာတတ်သည်တဲ့။ သည်အတိုင်းဆိုလျှင်တော့ သမီးလေးများသည် စနေနေ့ မွေးဘို့သေချာသလောက် ဖြစ်နေပြီ။ ဗေဒင်ယတြာကို ယုံလွန်းသည်တော့ မဟုတ်ပေမယ့် ခိုင့်မှာ စိတ်အစွဲလေးတော့ နည်းနည်း ရှိမိသည် အမှန်ပင်။ စနေထက် စာလျှင်တော့ သောကြာသမီးလေးများ ဖြစ်သည်က ပိုကောင်းမည်ပေါ့။ မောင့်ရှေ့ တော့ ဤသို့မပြောရဲပါ။ မောင်က လက်တွေ့ သမား.. “မောင့်အကြောင်းကို မောင့်ထက်ပဲ ဗေဒင်ဆရာက ပိုသိနိုင်မလား…” ဟု အမြဲပြောတတ်သူ။ မောင်နှင့် ခိုင် လက်ထပ်စဉ်က မင်္ဂလာရက် သတ်မှတ်ပေးသည့် ဗေဒင်ဆရာက ဟောဘူးသည်။ အင်္ဂါသားဖြစ်သော မောင် နှင့် ကြာသပတေးသမီး ခိုင်တို့မိတ်ဖက်ဖြစ်၍ စီးပွားလည်း တက်မည်တဲ့။ သားသမီး ရလျှင် သောကြာ ဖြစ်ပါက ပို၍ အကျိုးပေးမည်ဟု ဆိုသေး၏။ စဉ်းစားနေရင်း ဗိုက်က အတော်လေးနာလာပြီ။ မကြာမီအချိန်အတွင်း လူ့ လောကသို့ရောက်လာ တော့မည့် သမီးလေးများ အတွက် မိခင်လောင်း ခိုင် တစ်ယောက် အကြီးအကျယ် စိတ်လှုပ်ရှားကာ အားအင်တွေ ပြည့်နေပါ၏။ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသော ခြင်းတောင်းနှင့် အိတ်ကို သယ်ကာ ဆေးရုံသွားရန်ပြင်ကြသည်။ မောင် ကားသွားငှားနေသည်ကို စောင့်ရင်း ခိုင်
ဘုရားရှိခိုးနေလိုက်သည်။ တတ်သမျှမှတ်သမျှ ၀ိပဿ နာ နည်းလေးတွေကို ရှုမှတ်ရင်း နာကျင်မှုဝေဒနာကို အေးဆေးသက်သာစွာ ရင်ဆိုင်ရန် ကြိုးစားမိသည်။ သတိမလွတ်ဘို့ အရေးကြီးသည် မဟုတ်ပါလား။ မိခင်တိုင်းရင်ဆိုင်ရသည့် အရေးပေပဲနော်။ ခိုင် လုပ်နိုင်မှာပါ။ စိတ်ထဲမှလည်း မေမေ့ကိုရည်မှန်းကာ ကန်တော့မိ၏။ မေမေတစ်ခါပြောဘူးတာ မှတ်မိသေးသည်။ ခိုင့်ကိုမွေးတော့ မိန်းကလေးဆိုတာ သိသိချင်း “ငါ့သမီးလေးလည်း တစ်နေ့ငါ့လို နာရဦးမှာ ပါလား ”
လို့ တွေးမိခဲ့သည်တဲ့။ ထိုခေတ်တုန်းကတော့ ကျားရယ် မရယ်လို့မွေးကာမှ သိရသည်ကိုး။ ခိုင်ကတော့ ဟိုးစောစောကတည်းက တွေးမိပြီ မေမေရေ။ အခု ခိုင်လည်း မေမေ့လို နာနေရပြီ.. ခိုင့်သမီးလေးတွေလည်း ခိုင့်လို နာကြရဦးမယ်.. ဒါက ရှောင်လွဲဘို့မသင့်တဲ့ အိမ်ထောင်သည် မိန်းမသားတို့ ရဲ့ လူသားတာဝန် တစ်ခုပဲ မဟုတ်လား မေမေ..။ အိုးးး… မေမေ့ကို တ ရင်း စဉ်းစားနေတုန်း ဗိုက်ထဲက
သမီးလေးများက တွန်းထိုး လှုပ်ရှား လာကြသည်။ ခိုင် ရင်တွေ ခုန်လိုက်သည့်ဖြစ်ခြင်းနော်။ လက်ဖျားလေးများပင် အေးစက်စက်ဖြစ်ကာ တုန်ရီလာသည်။ ဟူးးး… သက်ပြင်းချရင်း လက်တစ်ဘက်ကို နောက်ပစ် ထောက်ကာ ထိုင်လိုက်၏။ ကျန်လက်တစ်ဘက်ဖြင့် ဗိုက်ကို ပွတ်သပ်ပေးရင်း ဘုရားစာတွေ ဆိုနေမိသည်။ သမီးလေးများလည်း မိမိနှင့် အတူ ရင်ဆိုင်ရမည်ပေကိုး။ ခိုင့်အတွက်တော့ ကလေး ရိုးရိုးမွေးဖွားခြင်းသည် မိခင်တစ်ဦးတည်း၏ အားဟု မထင်ပါ။ ကလေးငယ်များလည်း မပြောပြတတ်လို့ သာ.. သူတို့ လည်း လူ့ လောကထဲ ရောက်ဖို့အရေး ကြိုးစား ရုန်းကန် ရသေးသည်ပဲနော်။ မောင် တိုက်တွန်းသလို ဗိုက်ခွဲ မွေးခဲ့ရင်တော့ တစ်မျိုးပေါ့လေ။သည်လို တွေးမိတော့လည်း မိမိဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့် သမီးလေးများပါ ပင်ပန်းရတော့မည်ကို စိတ်မကောင်းဖြစ်မိသွားသည်။ ဗိုက်ကလေးကို ညင်သာစွာ ပွတ်သပ်ရင်း သမီးလေးများကို မေတ္တာဓါတ် ပို့ လွှတ်ကာ ရင်ထဲမှ စကားတွေပြောနေမိသည်။“သမီးတို
့ရေ.. ခဏလေးပဲ သည်းခံပါကွယ်.. သိပ်မကြာခင် မေမေ့တို့တွေ့ ကြရတော့မယ်… မေမေ့သမီးလေးတွေ ဘယ်လောက် ချစ်စရာကောင်းလည်း မေမေမြင်ရတော့မယ်… အို.. မေမေ့စိတ်တွေ လှုပ်ရှားလိုက်တာကွယ်… သမီးလေး နှစ်ယောက် ဆင်တူလေး.. ချစ်စရာ မျက်နှာလေးတွေနဲ့လူသေးသေး ပုစိကွေးလေးတွေ… မေမေ့ဗိုက်ထဲက ထွက်တာနဲ့အော်ငိုကြမလား… အသံလေးတွေက စူးစူးလေး ဖြစ်မယ်ထင်တယ်… ဘယ်သူကများ ပိုကျယ်ကျယ် ငိုလေမလည်း… လက်ကလေး ခြေကလေးတွေကကော.. အရုပ်ပေါက်စ အရွယ်လေးတွေ
ပေါ့နော်.. မေမေ့ ချိုချိုကို အလုအယက် စို့ ကြလေမလား… သမီးတို့ဖေဖေကတော့
ခုကတည်းက ပြောနေပြီနော်.. သမီးတို့ထွက်လာရင် ဖေဖေ့ဘို့ကျန်မှာ မဟုတ်ဘူးတဲ့လေ… နောက် တစ်ပါတ်လောက်ဆို မေမေတို့အိမ်ကလေးမှာ သမီးတို့အသံလေးတွေရယ်.. မေမေ့နား မကပ်ရလို့စူပုပ်ပုပ် ဖြစ်နေမဲ့ ဖေဖေရယ်.. မေမေနဲ
့ သမီးတို့ ပေါင်းပြီး ဖေဖေ့ကို ကရော်ကရော် လုပ်ကြမယ်လေ…နော်…”
ည (၇) နာရီထိုးခါနီးပြီမို့ကိုဇာနည် လမ်းထိပ်အထိ ထွက်ကာ ကားငှားရသည်။ ဆောင်းလေ တဖြူးဖြူးတိုက်နေသော်လည်း လူက ချွေးပြန်နေ၏။ သည်အချိန် သည်ရပ်ကွက်တွင် ကားငှားရတာ သိပ်မလွယ်လှချေ။ နောက်ဆုံး မရသည့်အဆုံးတော့ ရုံးမှ ကားသမားကို ဖုန်းလှမ်းဆက်ကာ အကူညီ တောင်းရမည်။ (၅)မိနစ်လောက်တော့ စောင့်ကြည့်လိုက်ဦးမည်။ စာအုပ်ထဲတွင် ဖတ်ဘူး သည်ကတော့ စတင်ဗိုက်နာသည်နှင့်
ချက်ချင်းမွေးတာမျိုး မဟုတ်ဘူးပဲ။ ဒေါ်လေးကလည်း ညနက် ပိုင်းလောက်မှ မွေးနိုင်မည်ဟု မှန်းသည်။ ကျွမ်းကျင်သော ဆေးပညာရှင် မဟုတ်သော်လည်း မိမိတို့ နှင့်စာလျှင်တော့ ဒေါ်လေးက အတွေ့ အကြုံ သာသေးသည်ပဲလေ။ မဟုတ်တရုတ် အယူ သီးလွန်းသည်က လွဲလို့ ပေါ့။ လမ်းမပေါ်တွင် ဟိုဘက် လျှောက်လိုက် သည်ဘက် လျှောက်လိုက်နှင့် ကိုဇာနည် ယောက်ယက်ခတ်နေသည်။ လက်နှစ်ဘက်က ခါးကိုထောက်လိုက်.. လက်ဝါးချင်း ပွတ်ချေလိုက်.. မျက်နှာကို ပွတ်လိုက်.. ခေါင်းပေါ်က ဆံပင်တွေကို ဖွလိုက်။“ခိုင် တော်တော်များ နာနေပြီလား မသိဘူး.. ခိုင်တစ်ယောက်က တစ်ကယ့် ကလေးလိုပဲ.. ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဗိုက်နာလို့နာနေမှန်းလည်း မသိ.. ၀ယ်ပေးထားတဲ့ စာအုပ်တွေလည်း မဖတ်ဘူးလား မသိပါဘူး… အတွေ
့အကြုံကလည်း မရှိ.. ကြိုတင်စီစဉ်လို့ရအောင် ခွဲမွေးပါဆိုတော့လည်း မဟုတ်.. ကားကလည်း ငှားရခက်လိုက်တာ သည်အချိန် သည်ဘက်ကို မလာကြတော့တာ ထင်တယ်.. စောစောက သိရင် ရုံးကဖယ်ရီကို ဆွဲထားလို့ ရသေးတယ်… ဟူးး ခံတွင်းချဉ်လာသလိုလိုပဲ… ဆေးလိပ် တစ်လိပ်လောက် သောက်လိုက်ရရင် ကောင်းမလား..
မဖြစ်သေးပါဘူး.. တော်ကြာ ဆေးလိပ် ၀ယ်နေတုန်း ကားလာတာ မသိလိုက်ရင် ဒုက္ခ.. သည်ညက သောကြာဆိုတော့ မနက်မှ မွေးမယ်ဆိုရင် စနေသမီးတွေပေါ့.. ခိုင် နဲ့ ဒေါ်လေးကို ပေါက်ကရတွေ လျှောက်မပြောအောင် ပိတ်ဟောက် ထားဦးမှ.. ”ထိုစဉ်
ခပ်လှမ်းလှမ်းဆီမှ တက်စီတစ်စီး လာနေသည်ကို တွေ့ လိုက်သည်။ ခရီးသည်ပါလား မပါလား.. မရပ်မည်စိုး၍ လမ်းမပေါ်ထိ ရောက်အောင်ပင် တက်ကာ ကားကို တားမိသည်။ အကယ်၍ ခရီးသည် ပါလာခဲ့လျှင်လည်း မိမိ အခက်ခဲကို ပြောပြကာ အကူအညီတောင်း၍ ရလိုရငြားပေါ့။ ကံကောင်းချင်တော့ ဘေးတစ်အိမ်ကျော်မှ တက်စီသမား မိတ်ဆွေ ကားသိမ်းလာတာနှင့် ကြုံသည်။ ကိုဇာနည် တစ်ယောက်ဖြင့် ထီပေါက် လျင်ပင် သည်လောက် ပျော်မည် မထင်ပါ။ ခိုင်ပြောနေကျအတိုင်း ပြောရလျှင်ဖြင့် သမီးလေးများ၏ ကံဟုပဲ ဆိုရလေမလား.. ကိုအေးမောင်က သည်အချိန် ကားသိမ်းနေကျ မဟုတ်မှန်း ကိုဇာနည် သိသည်ပဲလေ။ ဘာပဲပြောပြော အဆင်ပြေ သွားတာကိုတော့ ကျေးဇူးတင်ရပါသည်။ မဟုတ်လျှင် ရုံးကားကို လှမ်းမှာရန်မှာ အတွေးလွယ်ပေမယ့် သည်ချိန် ကားသမားတွေက ရုံးပိုင်ဂိုဒေါင်တွင် ကားသိမ်းကာ အိမ်သို့ ပြန် သောက်ကြ စားကြ အနားယူကြသည်ကိုး။ အနားသို့အရှိန်လျှော့ကာ ထိုးရပ်လာသော ကားထဲသို့ငုံ့ ကြည့်ရင်း..“ကိုအေးမောင် ကားသိမ်းလာတာလားဗျ…”“ဟုတ်တယ် ကိုဇာနည်… ဘာလည်း… မခိုင် ဗိုက်နာပြီလားဗျ…”“ဟုတ်တယ် ကိုအေးမောင်ရယ် အားတော့နာပါတယ်… ကူညီပါဦးဗျာ…”“အားနာစရာလားဗျာ..
ကဲလာ တက်…ကျနော် သည်ဘက်ကို ခရီးသည်ရတာနဲ့တစ်လက်စတည်း သိမ်းလာလိုက်တာလေ..
ခါလီပြန်လာရတာထက်စာရင် ကိုက်သေးတာပဲကော.. မခိုင်က သားဦး ဖြစ်တဲ့ အပြင် အမြွှာဆိုတော့ ပိုပင်ပန်းမှာဗျ.. ကျနော့် အငယ်ဆုံးကောင်တုန်းက အိမ်မှာတင် မွေးတာလေ.. လွယ်ဘူးဗျ.. သူတို့ရေလည်ခံစားရတာ… တကယ့် ကျွတ်ဆင်ကြီး… ”“ကျနော်လည်း
ပြောပါတယ်ဗျာ.. ခွဲမွေးဘို့ … ခိုင်က ခေါင်းမာတယ်ဗျ… ကျနော်ကိုကလည်း မှားတာပါဗျာ.. ဇွတ်အတင်း စီစဉ်လိုက်ရမှာ… ခုတော့ သူလည်းနာ… ကိုယ်လည်း စိတ်ပူ…ဟူးးး…”“သိပ်ကြီးလည်း မပူပါနဲ့ ဗျာ.. ဒါက သဘာဝ ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်ပါ.. သည်အချိန်မှာ သူ့ ကို အားပေးရမယ်ဗျ.. စိတ်ပူတာလည်း ပူတာပေါ့ဗျာ… ကျနော်တို့တုန်းကလည်း သည်လိုပါပဲ.. ”အိမ်ရှေ့ ရောက်တော့ အထုတ် အပိုးတွေချကာ လည်တဆန့် ဆန့်ထွက်မျှော် နေသော ဒေါ်လေးကို အရင် တွေ့ ရသည်။ ကားရပ်သည်နှင့် ကသောကမြော ဆင်းကာ..“ကံကောင်းလို့ဒေါ်လေးရေးး… ကိုအေးမောင် ကားသိမ်းစောလာတာ ကျေးဇူးတင်ရမယ်.. ခိုင်ကော တော်တော် နာနေပြီလား…”“အိမ်ထဲမှာ ဇာနည်ရေ… စောစောကတော့ ဘုရားရှိခိုးနေတယ်.. ပစ္စည်းတွေ ဒေါ်လေး တင်နှင့် လိုက်မယ်.. သားက ခိုင့်ကို သွားတွဲချည်…”“ကျနော် လှခင်ကို တစ်ချက် ပြေးပြောလိုက်ဦးမယ် ကိုဇာနည်… ပစ္စည်းတွေတင်နှင့်လိုက်နော်…”“ဟုတ်ကဲ့ဗျာ… မြန်မြန်လေးတော့ ပြန်လာပေးပါ ကိုအေးမောင်ရေ.. အားကိုးပါတယ်ဗျာ နော်…”“မြန်တယ် မြန်တယ် ကျနော် ချက်ချင်းပြန်ပြေးခဲ့မယ်…”ကိုအေးမောင်
ပြောလည်းပြော ပြေးလည်းပြေးလေ၏။ ကိုဇာနည် အိမ်ထဲဝင်ပြီး ခိုင့်ကို တွဲခေါ်သည်။ သနားစရာ ခိုင်ကလေး မျက်နှာတွင် ချွေးစက်များနှင့် နှုတ်ခမ်းကလေးများ တုန်ရီနေသည်။ ကြည့်ရတာ အတော်လေးများ နာနေပြီလား။ မျက်ဝန်းကလေးတွေ အရည်လဲ့ကာ မိမိကို မော့ကြည့်နေရှာသည့် ဇနီးသည်ကို ကြင်နာစွာ တွဲထူလိုက်ရင်း….“သိပ်နာနေလား ခိုင်… ကားရောက်ပြီနော်.. မောင်တို့ဆေးရုံသွားကြမယ်.. နော် ခိုင်လေး…”“အင်း ဟင်း.. မောင်ရယ်.. ရပါတယ်..ခိုင် အဆင်ပြေပါတယ်… နည်းနည်း အင်းးး ကျွတ်… နည်းနည်း နာတယ် မောင်ရယ်…ဟင်းးး…”ကိုဇာနည်
တစ်ယောက် အသွားလမ်းတလျှောက်လုံး ခိုင့် မျက်နှာကို မမှိတ်မသုံကြည့်ကာ နေမရ
ထိုင်မရဖြစ်နေမိသည်။ အိမ်ထောင်သည် ကလေး (၃) ယောက် အဖေဖြစ်သော ကိုအေးမောင်က..“မိန်းမတွေ ကလေးမွေးခါနီး ဗိုက်နာတာ တကယ် သနားဘို့ ကောင်းပါတယ်ဗျာ.. ဘေးက မြင်ရတဲ့သူလည်း မစားသာဘူး… လှခင်တုန်းကလည်း သည်လိုပဲဗျ.. သူတို့နာနေတာ ကြည့်ရမယ့်အစား ကိုယ်သာ ၀င်နာလို့ ရရင် နာပေးလိုက်ချင်တယ်…”“အေးဗျာ…ခိုင်လေး… မောင်ရှိတယ်နော်… သိပ်နာနေလား…” “အင်းးး ဟင်းးး … နာတယ်မောင်ရယ်… ကျွတ် ကျွတ်…”“ရောက်တော့မှာပါ.. ခဏပဲ… နော်.. အသက် ပြင်းပြင်းရှု… မျက်စိမှိတ်ထားနော် ခိုင်… မောင့်ကို မှီထား… အိုကေ…”စိတ်ထဲကတော့
“မောင့်စကားနားထောင်ပြီး ဗိုက်ခွဲမွေးရင် ခိုင် သည်လို နာမှာ မဟုတ်ဘူး…” ဟု ပြောနေမိသည်။ နှုတ်ဖျားကတော့ သည်စကားလုံးများ ထွက်မလာပါ။ တကယ်တမ်း ဝေဒနာ ခံစားနေရသော ဇနီးသည်ကို အပြစ်တင်စကား မဆိုရက်နိုင်ပါချေ။ ချွေးစို့ နေသော နှဖူးလေးကို အကြင်နာ အနမ်းများပေးနေမိသည်။ နာကျင်မှုဝေဒနာကို အံတုနေရသော ခိုင့် ရင်မွှာတို့ က ဖားဖိုသဖွယ် နိမ့်လိုက်မြင့်လိုက်။ ညည်းတွားသံသဲ့သဲ့တို့ က ကိုဇာနည့် ရင်ကိုပါ ကူးစက် နာကျင် နေတော့သည်။ အချစ်ကမ္ဘာလေးတွင် နှစ်ဦးသားပျာ်မွေ့ စဉ်အခါက သည်သို့ငိုညည်းညည်း အသံ ကလေးကပဲ မိမိ၏ ရမ္မက်သွေးတို့ ကို ဆူဝေ စေခဲ့သည် မဟုတ်ပါလား.. မရိုးနိုင်သော
အချစ်၏ အရသာတို့ ကို မြိန်ယှက်စွာ သုံးဆောင်ကြစဉ်က နှစ်ယောက် အတူတူ.. ယခုတော့ ခိုင့်ခမျာ ဝေဒနာ၏ဒဏ်ကို တစ်ယောက်တည်း ခံစားနေရရှာသည်။ မိမိက ချစ်ဇနီးကို ထွေးပွေ့ ထားရုံမှလွဲ၍ ဘာများ တတ်နိုင်ပါသေးသနည်း။ ဆေးရုံဝင်းထဲ
ကားဝင်ပြီး မွေးလူနာဆောင်ဆီ ရောက်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် ခိုင် တစ်ယောက် လမ်းပင် ကောင်းကောင်း မလျှောက် နိုင်တော့ပေ။ သူနာပြုဆရာမများ၏ အကူအညီဖြင့် မွေးခန်းထဲ ၀င်သွားသော ခိုင့် ကိုကြည့်ရင်း ကိုဇာနည် ငိုချင်သလိုလို… မိမိကိုယ်ထဲကပဲ နာကျင်လာသလိုလို..ခိုင့် အလိုလိုက်ပြီး ရိုးရိုးမွေးဘို့ခွင့်ပြုမိတာ မှားသွားပြီလား.. ဘာပဲပြောပြော ဟိုးစောစော ကတည်းက အိမ်ဦးနတ် အာဏာသုံးပြီး တစ်ချက်လွတ် အမိန့် ပေးခဲ့ရမှာကို။ ခုနေ ဆရာဝန်ကြီးထံ သွားပြီး ဗိုက်ခွဲမွေးပေးဘို့ပြောရကောင်းမလား… အတွေးပေါင်းစုံ ယောက်ယက်ခတ်ရင်း မွေးခန်း ရှေ့ တွင် ခေါက်တုန့် ခေါက်ပြန် လျှောက်ကာ လူရော စိတ်ပါ အငြိမ် မနေနိုင်ပါတော့ချေ။
ပြင်းထန်သော ဝေဒနာ၏ ဒဏ်ကို အံတုရင်း ခိုင် ကြောက်စိတ်များ ၀င်လာမိသည်။ ဆရာမများ၏ အားပေးစကားသံများကခိုင့် ဝေဒနာကြားမှာ တိမ်မြုပ်နေသယောင်။ စိတ်ထဲမှလည်း မေမေ့ကို တ လိုက်.. မောင့်ကို တ လိုက်ပေါ့။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့် အမျှ ဝေဒနာက သည်းလာသည်။ မေမေရေ… ခိုင့်ကို သည်လိုပဲ နာကျင်ပြီး မွေးထုတ်ခဲ့ရတာလား.. ခိုင့် သမီးလေးတွေလည်း ခိုင့်လိုပဲ နာရမှာလားမေမေ..။ မွေးခန်းကုတင်ပေါ်တွင် လူးလိမ့်ခံစားရင်း ညီးတွားမိသည်။ သမီးလေးတို့ ရေ… သမီးတို့ လည်း ငိုများငိုချင်နေမလား.. သမီးတို့မေမေ့ဗိုက်ထဲကနေ ချောချောမောမော ထွက်လာနိုင်ပါ့မလား.. မောင့်စကား နားမထောင်မိတာများ မှားပြီလားမသိဘူး.. သမီးလေးတွေ တစ်ခုခုများ အဆင်မပြေခဲ့ရင်။ မိမိခံစားရသော ဝေဒနာအပြင် ရင်သွေးများအတွက်ပါ ပူပန်နေမိသည်။ အချိန်ကလည်း ညနက် သန်းခေါင် တိုင်နေပြီ.. သောကြာတွေ စနေ တွေလည်း တွေးမနေနိုင်အားတော့ပါ။ ခံစားနေရသည့် ဝေဒနာက ပြင်းထန် လွန်းသည်လေ။“ဟုတ်ပြီ ညီမလေးရေ… ညှစ်ထား.. အားမလျှော့လိုက်နဲ့ နော်…”“အင်းးး… ဟူးးး… နာ တယ်… အရမ်းနာတယ်… ”“သည်လိုပဲ ညီမလေးရေ… အမေတိုင်း သည်လို ချည့်ပါပဲ… ခဏပါပဲကွယ်…”“ဟင့်အင်းး… မေမေရေ… အားးဟားးး…”“ညှစ်
ညီမလေး… အသက် ကိုအောင့်ထားပြီး ညှစ်လိုက်.. သားဦးဆိုတော့ ခက်တာ သဘာဝ ပါပဲကွယ်.. ခဏနေ ကလေးငိုသံကြားရင် ငါ့ညီမ နာနေတာတွေ ပျောက်သွားမှာပါ…နော်…”“မောင်ရေးးး… အာာားးး ဟားးး… ဟင့် ဟင့်…”“အို.. မငိုရဘူးလေ.. ညီမရယ်… ရှိပါတယ်.. ညီမအမျိုးသား အပြင်မှာစောင့်နေတယ်… ”“အရမ်းနာတယ် ဆရာမရယ်… ခိုင့်ကို ခွဲမွေးပေးပါတော့… ဆရာကြီးကိုပြောပေးပါ…အား… ဟားးး….”“ကလေးက မွေးလမ်းကြောင်းထဲ ရောက်နေပြီ ညီမရဲ့… အားတင်းထားပါ… နော်… ခဏပဲ.. ခဏပဲ… နည်းနည်း အားစိုက်လိုက်… နော်…ရပြီ… ရပြီ… ”“အင်းးး ဟင်းးး ဟင်းးးး…..”“ဟုတ်ပြီ… ညီမ… စိတ်မလျှော့လိုက်နဲ့ … ရပြီ…ကလေး ခေါင်း မြင်နေရပြီနော်… နည်းနည်းလေး… နည်းနည်းလေး… အားစိုက်… ဟုတ်ပြီ.. ဟုတ်ပြီ…”“ဟုတ်ပြီ… ညှစ်ထား… ညှစ်ထား… ”“အရမ်း နာတယ်… အာာားးး ဟားးး… ဟင့် ဟင့်…”“ဝေးးး
ဘယ်လို လည်းကွ… မိမိခိုင်…သမီး… ညည်းပဲ အမေဆိုတာ အားရှိရမယ်ဆို… သည်လောက်တော့ အပျော့ပေါ့ကွာ… နော့… ကိုင်းးး အထဲက မင်းသမီးလေးတွေ မြန်မြန် ထွက်လာ ကြဟေ့… နင်တို့အမေ ငိုနေပြီ… ”သေလုမြောပါး ဝေဒနာခံစားနေရချိန် နွေးထွေးသော အားပေးသံကို ကြားလိုက်ရသည်။ အိုဂျီ ဆရာကြီးပဲ။ ခိုင့် သမီးလေးတွေကို မွေးထုတ်ပေးဘို့ဆရာကြီး ရောက်လာပြီ။ ခိုင် အားတက် သွားမိ၏။ ဟုတ်သားပဲ.. အမေဆိုတာ သားသမီးမွေးဘို့ အားလောက်တော့ ရှိရမယ်လို့ဆရာကြီး ရှေ့ မှာ ခိုင် ကိုယ်တိုင် ပြောခဲ့ဘူးတာပဲ။ ခိုင် လုပ်နိုင်မှာပါ။ ခိုင့်ကို ကိုယ့်စကားနှင့် ကိုယ် ပြန်အားပေး လိုက်သော ဆရာကြီး၏ အားပေးမှုက အထူးပင် ထိရောက်လှပါသည်။ မွေးခန်းထဲတွင် ဆရာကြီးနှင့် ဆရာမများ… အပြင်တွင် စိတ်ပူနေမည် ဖြစ်သော မောင်… ဗိုက်ထဲတွင် လူ့ လောကထဲသို
့ ၀င်ခွင့် ရရန် ကြိုးစား ရုန်းကန်နေရှာမည့် သမီးလေးနှစ်ယောက်။ ခိုင် အာရုံတွေကို စုစည်းလိုက်ပါသည်။ အသက်ကို ပြင်းပြင်းရှုသွင်းကာ အားယူလိုက်၏။ သမီးလေးများ၏ “မေမေ…” ဆိုသော ခေါ်သံကလေးကို စိတ်မှန်းနှင့် ကြားယောင်လိုက်သည်။ နောက်ဆုံး မိမိခွန်အားရှိသမျှ အစွမ်းကုန် စိုက်ထုတ်ကာ ကြိုးစားလိုက်၏။ သေချင် သေသွားပါစေ.. စိတ်ကို တဆုံးထိလျှော့ချလိုက်သည်။ ထူးဆန်းသော တွန်းအားတစ်ခုကြောင့်လား.. အသက်ပျောက်မတတ် ဝေဒနာ ဆိုး နင့်ကနဲ နှင့်အတူ မျက်လုံးများ ပြာဝေကာ… ရင်ထဲမှ လှပ်ကနဲ ခံစားလိုက်ရသည်။ “အားးးး…. ဟူးးးးး….”“ဟုတ်ပြီ… ဟုတ်ပြီ… မှန်တယ်… ညှစ်ထား… အားမလျှော့လိုက်နဲ့ ….”“အားးး…...”“အုဝဲ… အုဝဲ… အုဝဲ…”နားထဲမှာ
ကြားလိုက်ရသည့် ကလေးငိုသံ… အို.. သမီးလေး တစ်ယောက် အဆင်ပြေပြေ လူ့ လောကထဲ ရောက်လာပြီပေါ့နော်..ခိုင့်အင်အားတို့ချိနဲ့မောပန်းနေသော်လည်း စိတ်အစဉ်က လန်းဆန်း နေပါသည်။ သမီးလေး၏ ငိုသံက မိမိအား ခွန်အားတစ်ရပ် ဖြည့်ပေးလိုက်သည် ထင်ပါရဲ့လေ.. အနားမှ သူနာပြုဆရာမ၏ (၁၁) နာရီ (၅၅) ဟုပြောလိုက်သံကို ကြားလိုက်ရသည်။ သောကြာ သမီးလေးပေါ့။ ခိုင် ကြာကြာ အမောမဖြေနိုင်ပါ.. မိမိဝမ်းကြာတိုက်ထဲတွင် ဒုတိယ သမီးလေး ရှိနေသေးသည်လေ.. ဆရာမ တစ်ဦးက ခိုင့် နှဖူး နှင့် လည်ပင်းတလျှောက်မှ ချွေးတို့ ကို မျက်နှာသုတ်ပုဝါ အေးအေးလေးဖြင့် လာသုတ်ပေး၏။ နောက်တစ်ချီ ကြိုးစားရပြန်ပါသည်။ လက်ငင်းပင် သိခဲ့ပြီးသော အတွေ့ အကြုံကြောင့်ထင့်.. ပထမတစ်ယောက်ထက် အနည်းငယ် ပိုမြန်သလို ထင်လိုက်မိသည်။ ဒုတိယအကြိမ် လေထဲမှ ပြုတ်ကျသလို ခံစားချက်နှင့် အတူ နောက်ထပ် ငိုသံစူစူးလေး
တစ်ခု။ အွန်းး အငယ်လေးအသံက ပိုကျယ်သလိုပဲ.. ကြည့်ရတာ မမကို အနိုင်ကျင့်မယ့် ခပ်ဆိုးဆိုးလေးများ ဖြစ်နေမလား.. အတွေးနှင့် အတူ ခိုင် ပြုံးမိပါ၏။ နှုတ်ခမ်းတို့ က ခပ်ယဲ့ယဲ့သာ ပြုံးနိုင်သော်လည်း မိမိမျက်ဝန်းတို့အရောင်တလက်လက် ထွက်နေမည်ကို စိုစွတ်နေသော မျက်ရည်များကြောင့် သတိထားလိုက်မိပါသည်။ ပျော်လိုက်တာ… သမီးလေး နှစ်ယောက်လုံး လူ့ လောကထဲ အောင်အောင်မြင်မြင် ရောက်လာပြီပဲ.. “ကဲ… ညီမလေး.. ပင်ပန်းသွားပြီ ဟုတ်လား… သမီးလေးနှစ်ယောက်လုံး အင်္ဂါစုံတယ်နော်… ကျန်းကျန်းမာမာပဲ.. အငယ်လေးကတော့ ပို သန်မယ့်ပုံပေါက်တယ်..”“ဟုတ်.. ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဆရာမ.. ”“သည် အမြွှာညီအစ်မက နေ့ မတူဘူးကွ… တစ်ယောက်က သောကြာ… တစ်ယောက်က စနေ… ဟင်းဟင်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်… ”“ဘယ်လို.. ဘယ်လို… ဆရာမ ဘာပြောတာလည်းဟင်…”“အော်…
သည်လိုလေ ညီမလေးရယ်… ပထမတစ်ယောက်က (၁၁) နာရီ (၅၅) မိနစ်လေ.. အငယ်လေး ထွက်လာတာ (၁၂) နာရီ (၅) မိနစ်… သည်လိုဆိုတော့ သူက စနေဘက် ကူးသွားတာပေါ့.. ခြားတဲ့ အချိန်က (၁၀) မိနစ်ပေမယ့် ညသန်းခေါင်ဆိုတော့ တစ်ရက် ကူးသွား တယ်လို
့ ပြောတာပါ…”သြော်… ဒါဆို သမီးငယ်လေးက စနေ သမီးပေါ့…ခိုင့် စိတ်ထဲ
စောစောပိုင်းက ရှိခဲ့သော အယူများ လားလားမျှပင် မတွေးမိတော့ပါ။ မိမိရင်မှ ဖြစ်သော သားသမီးဟူသည့် မေတ္တာစိတ်သည် အကောင်း အဆိုး အယူအဆများကို မြေလှန်ပစ်နိုင်စွမ်းသည်ထင့်။ စိတ်ထဲတွင် သမီးလေးများ အတွက် နံမည် လှလှလေးများ ပေးရန် စဉ်းစားနေမိသည်။ မောင်ကော… မောင်လည်း သမီးလေးတွေ မွေးပြီးပြီဆိုတာ သိပြီးလောက်ရောပေါ့နော်.. မောင့်ကို တွေ့ ချင်လိုက်တာ.. ခိုင် မျက်လုံးကလေး အသာ မှိတ်ကာခေတ္တ အနားယူမိသည်။ “ခိုင်.. ပင်ပန်းသွားပြီ.. ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခိုင်ရယ်.. သမီးလေးတွေက အရမ်း ချစ်ဘို့ကောင်းတာပဲ.. မောင့် ဘ၀ ပြီးပြည့်စုံသွားပြီ သိလား…”“မောင် ရယ်..”“ဟုတ်တယ်
ခိုင်.. မောင် တစ်ခါမှ သည်လောက် မပျော်ဖူးဘူး.. သည်လောက်လည်း စိတ်မလှုပ်ရှားခဲ့ဘူး.. မောင့်စိတ်ထဲမှာ ခိုင်နဲ့ သမီးနှစ်ယောက်ကို စိတ်ပူတာကော.. ပျော်တာကော ရောနေတယ်.. မိုးလင်းတာနဲ့ ဘုရားသွားမယ် သိလား.. သမီးလေးနှစ်ယောက်လုံး ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပြီး လိမ္မာ ထူးချွန်တဲ့ သမီးလေးတွေ ဖြစ်ဘို့ ဘုရားမှာ ဆုသွားတောင်းမယ်..”“ကလေး နို့တိုက်ရအောင် အစ်မ.. မွေး ပြီးတာနဲ့ နို့ဦးရည်ဝင်အောင် တိုက်ပေးရမယ်..” ခိုင့်
နှဖူးလေးကို တယုတယ ပွတ်သပ်ကာ စကားတွေ ဖောင်ဖွဲ့နေသော မောင်..။ သူနာပြု ဆရာမလေး ရောက်လာမှပင် အနားက ခွာတော့၏။ သမီးလေး နှစ်ယောက်၏ မျက်နှာ သေးသေးလေးများကို ကြည့်ရင်း ခိုင့်ရင်ထဲတွင် ပြောပြရန်မစွမ်းသာသော ခံစားမှုများ ဖြင့်ပြည့်နှက် နေတော့သည်။ “ဒေါ်လေးကော မောင်..”“ကိုအေးမောင်
နဲ့ ပြန်လိုက်သွား ခိုင်းလိုက်တယ်.. နက်ဖြန် ခိုင် စားဘို့သောက်ဘို့ ချက်ပြုတ်ပြီးမှ ပြန်လာလို့.. သည်မှာက ဆရာမလည်း ရှိနေတော့ မလိုဘူးလားလို့လေ.. သူလည်း နားရအောင်ပါ.. ခိုင် အဆင်ပြေတယ် မဟုတ်လား..”“ဟုတ်.. ပြေပါတယ် မောင်ရဲ့..”“သည်လိုချီ အစ်မ.. သူက အငယ်လေးလေ.. နို့ဆာနေရှာပြီ.. ပါးစပ်တပြင်ပြင်နဲ့ အာပြဲလေး.. ခိခိ.. သူ့ကို အရင်တိုက်လိုက်..”ဆရာမလေးက
သမီးလေးကို ခိုင့်ရင်ခွင်ထဲ နို့ချို တိုက်ကျွေးရန် လာထည့်ပေးသည်။ “ပန်းသီးလေးတွေ ကျနေတာပဲနော် မောင်..” ခိုင့်၏ ကြံကြံဖန်ဖန် ခိုင်းနှိုင်းစကားကို ဆရာမလေးက ရယ်၏။ မွေးကင်းစ ကလေး ဆိုတာကို ကိုယ်တိုင် မွေးလိုက်မှပင် မြင်ဘူးသော ခိုင့်အဖို့ ဤလူသား ပိစိကွေးလေးများ မိမိ ၀မ်းအတွင်းမှ ထွက်လာကြသည်ကို ကြည်နူး အံ့သြ မဆုံးတော့နိုင်။ စောစောပိုင်းက ခံစားခဲ့ရသည့် အသက်ပျောက်မတတ် နာကျင်မှုများသည်ပင်လျှင် ဘယ်ဆီ ရောက်သွားမှန်း မသိနိုင်တော့။ သမီးလေးများ၏ အသားလေးများက ပိုးသားထက်ပင် နူးညံ့ နေသေးတော့သည်။ ပါးပြင်မို့မို့ကလေးများပေါ်တွင် နီတြာတြာ သွေးကြောလေးများက ယှက်သန်းလျှက်။ ဆံစ တွန့်တွန့်လေးများကလည်း ပိုချည်မျှင်ကလေးများ အလား သေးမျှင်နုညက် နေသည်။ မျက်တောင်နှင့် မျက်ခုံးမွှေးလေးများကတော့ ပါသည်ဆိုယုံ အရာလေးမျှသာ။ ခိုင့်ရင်ခွင်ထဲ ထည့်ချီလိုက်တော့ သမီးလေး၏ ဦးခေါင်းလေးက လက်တစ်ဝါးစာ ကွက်တိ။ အနှီးဖြူဖြူဖြင့် ထွေးပတ်ထားသော ပူနွေးနွေး လှုပ်စိစိ ကလေး ပုစိကွေးလေးကို ကိုင်ရင်း ခိုင့် ရင်ထဲမှ ကြည်နူးမှုက တရိပ်ရိပ်။လူသားတစ်ဦး သင်ယူရန်မလိုဘဲ တတ်သော မွေးရာပါ အတတ်ပညာများတွင် နို့စို့ခြင်းက ထိပ်ဆုံးက ဖြစ်မည် ထင်သည်။ ပါးစပ် ပိစိကွေးလေးနှင့် အငမ်းမရ နို့စို့နေသော သမီးငယ်လေး။ ဖောင်းဖောင်းအိအိ ပါးလေးကို ခိုင့် လက်ညှိုးနှင့် တို့ကြည့်မိသည်။ အနားတွင် ထိုင်ကြည့်နေသည့် မောင့် မျက်နှာကလည်း ပီတိပြုံးတို့ ဝေလျှက်။ သမီးကြီးလေးကို ဆရာမက နို့ဗူးတိုက်ပေးနေသည်။ “ပြီးရင် သူ့လည်း အမေနို့ တိုက်မယ်နော် အစ်မ.. ဖော်မြူလာက မိခင်နို့လောက် အာဟာရ မပြည့်စုံဘူး.. ရောဂါ ကာကွယ်နိုင်တဲ့ ဓါတ်က မိခင်နို့မှာ ကောင်းဆုံးပါတာလေ..” ဆရာမလေးက ဤသို့ ပြောတော့ မောင် တစ်ယောက် ခွိ ကနဲ ရယ်၏။
ဟွန်းး ဘာပေါက်ကရ ပြောဦးမလဲ ကိုယ်တော်.. ခိုင့်စိတ်မှ တွေးကာ မျက်စောင်း လှလှလေး ထိုးလိုက်စဉ်.. “သေချာပြီခိုင်.. မောင့် ဘ်ို့ ဘယ်နည်းနဲ့မှ မကျန်နိုင်တော့ဘူး.. ခုတောင် တစ်ယောက်က လက်ပေါ်မှာ တစ်ယောက်က နောက်မှာ တန်းစီနေတယ်.. ဟီးဟီး..” ဆရာမလေး အလစ် ပြောဖြစ်အောင် ကပ်ပြောလိုက်သေး၏။“သမီးလေးတွေ အတွက် နံမည် စဉ်းစားထားလား အစ်မ.. သောကြာတစ်ယောက် စနေတစ်ယောက် ဆိုတော့..”“ကျနော် စဉ်းစားပြီးပြီဗျ.. ခိုင့် သိလား မောင်စဉ်းစားထားတဲ့နံမည် ခိုင်တွေးမိတာရှိရင်လည်း ပြောလေ..”“ဟင့်အင်း.. မောင်ပဲ ရွေးပါ.. ”“အွန်း.. အကြီးလေးက သောကြာဆိုတော့ သင်းသင်းမွှေး.. အငယ်လေးက စနေသမီး နှင်းဖွေးဖွေး.. ဘယ်လိုလည်း ခိုင်.. သဘောကျလား..”“၀ါးး အစ်ကိုက တွေးတတ်သားပဲ.. နေ့မတူ အမြွှာဆိုတော့ နံမည်ဆင်တူရဘို့ ခက်မယ် ထင်တာ.. ခုတော့လည်း ဟုတ်နေသား.. နော် အစ်မ..”ကရင်သံ
၀ဲဝဲလေးနှင့် ပြောလိုက်သော ဆရာမလေး၏ စကားကို အပြုံးနှင့် ခေါင်းငြိမ့်ရင်း
ခိုင် ထောက်ခံလိုက်တော့သည်။ မောင်ရယ်.. သူ့သမီးနှစ်ယောက်အတွက် တွေးတတ်လိုက်တာ.. အရမ်းလှတဲ့ ချစ်စရာ နံမည်ဆင်တူလေး နှစ်ခု.. သင်းသင်းမွှေး၊
နှင်းဖွေးဖွေး.. ။ အိုးး အတွေးဖြင့် ကြည်နူးနေစဉ် ခိုင့်ပေါင်ပေါ်သို့ ပူနွေးသော စီးဆင်းမှု တစ်ခု။ “ရှုရှုး ပေါက်ချပြီ ဆရာမရေ…”“လာပြီ အစ်မ.. ကျမ လုပ်ပေးမယ်.. အတော်ပဲ သူတို့ နေရာလဲရမယ်.. အကြီးလေး အမေနို့ စို့သင့်ပြီ… အစ်မလည်း ထမီ လည်းလေ.. ကျမ လုပ်ပေးမယ်.. ပြီးရင် ကလေးအောက်မှာ
ဒါလေးခင်းထားလိုက်.. စောစောက ကျမ အကြီးလေးကို နို့တိုက်ဘို့လောနေမိလို့ မေ့သွားတယ် အစ်မရယ်.. စိတ်မရှိပါနဲ့နော်..”“စိတ်ရှိစရာလား ဆရာမရယ်.. မအေပေါ် ကလေး သေးပေါက်ချတာ..”“ပေးပေး ဆရာမ ကျနော် ချီပေးထားမယ်..”“ချီတတ်လို့လား အစ်ကိုရဲ့..”“အာ ဘာခက်တာ မှတ်လို့ ဆရာမရယ်.. ပေးပါ.. ကျနော် ချီချင်လို့..”“ရော့.. ရဲရဲ ကိုင်နော် အစ်ကို.. သည်လိုလေး..”“ဟဟ.. အသည်းယား စရာလေးကွာ.. လူသေးသေးလေး.. အဟေးဟေး.. သမီးတွေက မောင်နဲ့တူတာကွ.. ကြီးရင် ချောမှာ.. နော် ခိုင်..”“ဟင်းဟင်း ဟုတ်မှာ ဟုတ်မှာ.. ဖြစ်နေလိုက်တာ တကတည်း မွေးရတဲ့ အမေသည်းဘို့လည်း ထားပါဦး အဖေကြီးရယ်..”“ဟားဟား..
ကြည့်စမ်း သမီးက ဖေဖေ့ကိုထောက်ခံနေတယ်.. မျက်လုံးကြီး မှိတ်ပြီး ရယ်ပြနေတယ်.. ခိုင့် သည်မှာ ကြည့်စမ်း.. ကလေးပုစိလေးက ရယ်တယ်ဗျ..”“ကြံကြံ ဖန်ဖန် မောင်ရယ်.. တကယ်ပဲ.. ခိခိခိ…”ဆရာမလေးက
မောင့် လက်ပေါ် ကလေး ထည့်ပေးပြီး ရှုးပေါက်ထားသော အငယ်လေးကို အနှီးလဲပေးရန် ပြင်သည်။ ကျွမ်းကျင် သွက်လက်သော ဆရာမလေး၏ လုပ်ပုံကိုင်ပုံများကို ခိုင် ငေးကြည့်နေမိ၏။ ထိုစဉ် သမီးလေးကို ငုံ့ကြည့်နေသည့် ခိုင် ရုတ်တရက် မှင်သက်မိသွားသည်။ “ခဏ.. ခဏလေး ဆရာမ.. ဒါလေးက ဘာလည်းလို့.. တစ်ခုခု ပေနေတာများလား..”“မဟုတ်ဘူး အစ်မ..”“ဘာလဲ ခိုင်.. သမီးလေး ဘာဖြစ်လို့လဲ..”သမီးကြီးကို
ချီထားသော မောင်က ထ လာကြည့်ရင်း မေးသည်။ မောင့် မျက်နှာကို ခိုင် မော့ကြည့်မိ၏။ မောင်လည်း ခိုင်မြင်လိုက်သော အရာကို တွေ့မြင်သွားသည်။ အေးမြ ကြည်လင်သော အပြုံးဖြင့် ခိုင့်ကိုကြည့်ရင်း.. “ဘာများလဲလို့ ခိုင်ရယ်.. မိန်းမ.. ပေါက်ကရတွေ တွေးပြီး ကလေးကို မဟုတ်တရုတ် နိမိတ်ဖတ်မယ် မကြံနဲ့.. နာမယ်.. ဟွန်းးး…” မောင် ဘယ်လိုပင် ပေါ့ပေါ့ ပြောသော်လည်း ခိုင်ကတော့ဖြင့် ရင်ထဲ မအေးလှပါ။ ဖတ်ဖူး မှတ်ဖူးသော စာအုပ်များနှင့် အရပ်ပြောစကားများ မှားပါစေ ဟုသာ တွေးနေမိသည်။ နှင်းဖွေးဖွေး ဟူသော ချစ်စရာ အမည်လေးနှင့် သမီးငယ်လေး၏ ရှုရှုးဖင်ကလေးတွင် မှဲ့နက် လေးက ထင်းနေသည်လေ။
“ဖွေးဖွေး ရေ.. မိဖွေး.. ဘယ်ရောက်နေပြန်လဲ ဒီကောင်မလေး...”“လာပြီ ဘွားလေး.. လာ ပြီ လာ ပြီ...”“ညည်း ဘာလုပ်နေတာလဲ… ဒီမှာ ခေါ်နေတာ လည်ချောင်း ကွဲတော့မယ်…”“အပေါ်ထပ်မှာ ကြမ်းတိုက်နေတာပါ ဘွားလေး…”“ညည်းအမ အ၀တ်တွေကော မီးပူတိုက်ပြီးပြီလား…”“ညနေ ကျူရှင်က ပြန်လာမှ တိုက် မလို့…”“ကျူရှင်က အပြန် ဈေးဝင် ၀ယ်ခဲ့ဦး.. ရေးပြီးပြီလား ၀ယ်ရမယ့် စာရင်း..”“ဟုတ်ကဲ့ပါ.. စာရင်းက ခဏနေ သွားခါနီးရင် ရေးမှာပါ ဘွားလေးရဲ့..”“ဘာ
ခိုင်းလိုက်ခိုင်းလိုက် သွက်သွက်လက်လက် တစ်ချက်မှ မရှိဘူး၊ ပြောလိုက်ရင် ပါးစပ်က ဟုတ်ကဲ့ ဆိုပြီး ပြန်ကြည့်တဲ့ အချိုးကိုပြင်ထား မိဖွေးဖွေး.. စနေဂြိုဟ်မ..”မြည်တွန်တောက်တီးရင်း ထွက်သွားသော ဘွားလေးကို ခေါင်းငုံ့ထားလျှက်မှ ပေစောင်း ကြည့်မိသည်။ “စနေဂြိုဟ်မ.. စနေဂြိုဟ်မ.. စနေဂြိုဟ်မ..” ဟူသည့် စကားက နားထဲမှ မထွက်။ သည်အိမ်တွင် မေမေရယ်၊ မွှေးရယ်၊ ဘွားလေး နှင့် ဖွေး.. စုစုပေါင်း မိန်းမသား လေးဦးသာ ရှိသည်။ သည်မိသားစု လေးဦးတွင် ဖွေးက အပယ်ခံ။ မေမေကတော့ မိခင်ပီပီ ဖွေးကို ထိုက်သင့်သလောက် ချစ်ကောင်း ချစ်ပါလိမ့်မည်။ မေမေ့ အဒေါ်ဝမ်းကွဲဖြစ်သူ ဘွားလေးကတော့ မွှေးမှ မွှေး။ စာတော်ပြီး အနေအထိုင် သိမ်မွေ့သော မွှေးကို လိုတာထက်ပိုပြီး အရေးပေး၏။
မွှေးကလည်း အလိုက် သိတတ်လွန်းသည်လေ။ မေမေနှင့် ဘွားလေး ထံမှ အရေးပေးမှုနှင့်
အချစ်ကိုရဘို့ နေတတ် ထိုင်တတ်သည်။ အောင်မြင်သော စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများကို တစ်ဦးတည်း လုပ်ကိုင်နေရသည့် မေမေကတော့ အိမ်တွင်းရေးများကို သိပ်အာရုံ မထည့်နိုင်အားပေ။ သမီးနှစ်ယောက်၏ အနေအထိုင်၊
ပညာရေး အစစအရာရာ အဒေါ်ဖြစ်သူ လက်ကို အပ်ထားရသည်။ ယောင်္ကျားသားများနှင့် ယှဉ်ကာ စီးပွား ရှာနေရသည့်မေမေ၊ မိုးလင်း မိုးချုပ် အလုပ်နှင့်သာ အချိန်ကုန်နေရသည်မို့ သမီးများနှင့် ကုန်ဆုံးရန် ကိုယ်ပိုင်ချိန်ဟူ၍ပင်မရှိ။ သမီးများနှင့် ပတ်သက်၍ ဘွားလေး ပြောသမျှ သာ အတည်ဖြစ်ရသည့် မေမေ့အတွက် ဖွေးက တကယ်ပဲ စနေဂြိုဟ်မလေးပေလား။ မေးကြောများ ထောင်လာသည်အထိ အံကျိတ်ထားရင်း လှိုက်တက်လာသည့် ၀မ်းနည်းမှုတို့ကို ခွန်အား အဖြစ်ပြောင်းယူလိုက်သည်။ ဒါက ဖွေးကို အလွန်ချစ်သော ဖေဖေ မှာခဲ့သည့်စကား။ ၀မ်းနည်းစရာ ကြုံလာတိုင်း၊ တနည်းအားဖြင့် “စနေဂြိုဟ်မ” ဟူသည့် စကားလုံးကို ကြားရချိန်တိုင်း သွားလေသူ ဖေဖေ့ကို တမ်းတကာ မျက်ရည်ကျမိသည်။ လူ့လောကထဲသို့ တပြိုင်နက် ရောက်လာရသူချင်းတူတူ (၁၀) မိနစ်တည်းသော အချိန်ကလေးကြောင့် စနေသမီး ဖြစ်ခဲ့ရသော နှင်းဖွေးဖွေး..။ သည်မိသားစုတွင် ကြုံလာသည့် အဆိုးဟူသမျှ စနေသမီး၏ ဂြိုဟ်ဆိုးကြောင့် ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ထမင်း ပန်ကန်တစ်ချပ် ကျကွဲသည့် ကိစ္စလေးမှသည် ဖွေးတို့ ညီအမ ဆယ်တန်းအောင်သည့် နှစ်က ကားအက်ဆီးဒင့်နှင့် ဖေဖေ ဆုံးပါးသွားရသည့် ကိစ္စအထိ စနေသမီး ဖွေး၏ ဂြိုဟ်ဆိုးက တရားခံ။ ကျလုလု မျက်ရည်တို့ကို ခါထုတ်ပစ်ရင်း တောက် တစ်ချက် ခေါက်မိသည်။ ၀မ်းနည်းခြင်း အနည်အနှစ်တို့က ခွန်အား ဖြစ်မလာဘဲ ဒေါသအဖြစ် ပြောင်းလဲ ကုန်၏။ အများ
အမြင်တွင်မတော့ မိမိက အထည်ချုပ်လုပ်ငန်းပိုင်ရှင် ဒေါ်မိမိခိုင်၏ သမီး၊ တနည်းအားဖြင့် သူဌေးသမီးပေါ့လေ။ အိမ်တွင် အလုပ်သမား ခေါ်ထားနိုင်ပါလျက် ဖေဖေ
ဆုံးပြီးကတည်းက ရှိပြီးသား လူဟောင်းများကိုပင် ဖြုတ်ပစ်ကာ ဖွေးတို့ ညီအစ်မကို အိမ်မှုကိစ္စ ကူစေရန် ဘွားလေး စီစဉ်ခဲ့သည်။ မိန်းမသားများချည်းသာနေသည့် သည်အိမ်တွင် အိမ်ဖော် ထားရန် မလို တဲ့။ ဘွားလေး
ဆုံးဖြတ်ချက်က မမှားသည်မို့ မေမေ မငြင်းခဲ့။ သို့သော် ခက်သည်က ချက်ရေးပြုတ်ရေးတွင် ဘွားလေးကို လက်တိုလက်တောင်း ကူရသည်မှ အစ ကျန်အိမ်မှုကိစ္စ ဗာဟီရအားလုံး ဖွေး တစ်ယောက်တည်း လုပ်ရသည်။ ဆေးကျောင်းသူ မွှေးက သူ့စာနှင့်သူပင် အနိုင်နိုင်လေ။ ဘီအေဘွဲ့လေး တစ်ခုရထားပြီး အလုပ်အကိုင်မရှိ၊ ဟိုဟိုဒီဒီ သင်တန်းလေးတွေ လိုက်တက်နေသည့် ဖွေးက ဆရာဝန်လောင်း အမဖြစ်သူ၏ ခိုင်းဖတ်။ ပြောင်လက်နေပြီးသား ပါကေးကြမ်းခင်းကို ဆောင့်ကြီးအောင့်ကြီး ပွတ်တိုက်ရင်း ကြမ်းပြင်တွင် ခပ်ရေးရေး မြင်နေရသည့် မိမိ ပုံရိပ်က စိတ်အစဉ်ကို အတိတ်သို့ ခေတ္တ ခေါ်သွားပြန်၏။ဖွေးတို့ ညီအမကို မွေးသည့် နှစ်မှာပင် ဖေဖေ အလုပ်တွင် ရာထူးတိုးသည်။ ဖွေးတို့ ညီအမအတွက် ဘွားလေးက အနီးကပ် စောင့်ရှောက်နေသဖြင့် မေမေလည်း အလုပ်မှ အနားယူစရာ မလိုခဲ့။ ဖွေးတို့ အသက် (၂) နှစ် သမီးတွင် နိုင်ငံခြားရှိ ကုမ္မဏီ
ရုံးခွဲ၌် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် ဖေဖေ ရွေးချယ်ခြင်း ခံရသည်။ လစာဝင်ငွေလည်း သုံးလေးဆ မက တိုးခဲ့သည်ဖြစ်ရာ အစုဆောင်း ကောင်းသည့် မေမေ့ အရည်ချင်းနှင့် ပေါင်းလိုက်တော့ ဖွေးတို့မိသားစု အတော်အသင့် ပြည့်စုံခဲ့၏။ ဤသို့သော ကံကောင်းခြင်းတွေ အားလုံးက သည်မိသားစု၏ lucky person မွှေး ခေါ် သင်းသင်းမွှေး
၏ ကံကြမ္မာ ကောင်းခြင်းကြောင့်။ သည် အယူအစွဲကို ထောက်ခံသည့် အကြောင်းရင်း တစ်ရပ်ကလည်း ပေါ်ခဲ့သေးသည်။ ဖွေးတို့ ညီအမ မူကြို တက်တော့ မူကြိုကျောင်းတွင်
ထီလုပ်ငန်း ပိုင်ရှင် မိသားစုမှ ကလေးငယ်တစ်ဦးက မွေးနေ့ အမှတ်တရအဖြစ် လက်ဆောင် အရုပ်များ မုန့်များ အပြင် ထီလက်မှတ်များ ဝေပေးသည်။ ဖွေးတို့ ညီအမ
ရခဲ့သည့် ထီလက်မှတ် (၂) စောင် အနက်မှ တစ်စောင်က ထီဆုကြီး ပေါက်ခဲ့၏။ အမြွှာညီအမ
နှစ်ယောက်ပေါင်း ထမင်းချိုင့် နှင့် ရေဗူး ထည့်သည့် ခြင်းတောင်းလေး တစ်လုံး တွင် ညီအမ နှစ်ယောက်စာအတွက် ဆရာမ ထည့်ပေးလိုက်သည့် ထီလက်မှတ် နှစ်စောင် အနက်မှ တစ်စောင်က ကံထူးသွားခြင်း ဖြစ်သော်လည်း ထို ကံကောင်းခြင်းက မွှေး ခေါ် သင်းသင်းမွှေး၏ ကံကြမ္မာ ကောင်းခြင်းကြောင့်ပင် ဖြစ်ခဲ့ရပြန်၏။ တကယ်တမ်း ထိုဖြစ်ရပ်တွေက သုံးနှစ်သမီးလေး နှင်းဖွေးဖွေး၏ ဦးဏှောက်သေးသေးလေးတွင် မှတ်မှတ်ရရ မရှိခဲ့သော်လည်း ဖေဖေ ဆုံးပြီးနောက် ဘွားလေး၏ ကံကြမ္မာ သရုပ်ခွဲ မှတ်တမ်းစကားများက ဖွေး အတွက် မသိမသာ စိတ်ဒဏ်ရာ ပေးခဲ့လေသည်။ထီပေါက်သည့် အခွင့်အရေးကို မိမိရရ အသုံးချလိုသော မေမေက
ကုမ္မဏီ မှ အလုပ်ထွက်ကာ အထည်ဆိုင်လေး တစ်ခုဖြင့် ကိုယ်ပိုင် စီးပွားရေးကို စတင်ခဲ့သည်။ အိမ်မှု ကိစ္စနှင့် ကလေးနှစ်ယောက် တာဝန်အတွက် ဘွားလေးကို ကူရန် နယ်ဘက်မှ အလုပ်သမလေးတစ်ဦး မေမေ ခေါ်ဖြစ်ခဲ့၏။ ဖေဖေက အဝေးတွင် ရောက်နေချိန်၊
မေမေက စီးပွားရေးဘက် အာရုံစိုက်နေရချိန်များတွင် ဘွားလေးထံမှ မျက်နှာကောင်းရလေ့မရှိသည့် ဖွေးအတွက် အိမ်အကူ နော်အယ်ဝါး (ဖွေး အခေါ် မမနော်) က ဖွေးအတွက် အကောင်းဆုံး အဖော်ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ သည်လိုနှင့် မူလတန်း ကျောင်းတက်သည့် အရွယ်ရောက်တော့လည်း စာတော်သည့် မွှေးက အတန်းထဲတွင် အမြဲ အဆင့် (၁) ရသည်။ စာမေးပွဲ ဆိုတာ ဖြေတာက ကိုယ့် အလုပ် စစ်တာက ဆရာမ အလုပ်ဟုသာ
ခပ်ပေါ့ပေါ့ ခံယူသော ဖွေးကတော့ ဘယ် ဘာသာမှ အမှတ် (၆၀) မပြည့်စဖူး။ ဖွေးကလည်း
ဖွေး ပင်။ ညီအမ နှစ်ယောက် အတွက် အိမ်တွင် ဆရာမ ငှားကာ ကျူရှင် သင်ချိန်များတွင် ဖွေး၏ အာရုံတစ်ဝက်က မွှေးနှင့် ယှဉ်ကာ မိမိကို ဆူသောငေါက်သော ဆရာမ ထံမှာ ထက် မိမိလိုချင်သမျှ အနွံတာခံ အလိုလိုက်သော မနော်
ဆီမှာ။ ဆရာမကိုယ်တိုင်ကလည်း ဥာဏ်ကောင်းသူကိုမှ မြင့်သထက် မြင့်အောင် မြှင့်လိုခြင်းပေလား၊ အိမ်တော်ထိန်း ဘွားလေး၏ အရိပ်အကဲကို နားလည်ခြင်းပေလား၊ အမြွာညီအမ နှစ်ဦးအပေါ် ဆက်ဆံပုံခြင်းက မတူ။ ငယ်စဉ် ကလေးဘ၀ ကတည်းက ကံကြမ္မာခြင်းယှဉ်က ခွဲခြား သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည့် ဖွေး၏ စိတ်က တစထက်တစ ညစ်ကျယ်ကျယ် ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဖွေးတို့ ညီအမ ငါးတန်း နှစ်တွင် ဖေဖေ မြန်မာပြည် ရုံးသို့ ပြန်ရောက်လာ၏။ မေမေ့ ဆိုင်ကလည်း အတော် အသင့်မက အောင်မြင်နေပြီ ဖြစ်ရာ ဖေဖေ စုဆောင်းလာသည့် ငွေများ ထပ်မံဖြည့်စွက်ပြီး အထည်ချုပ် လုပ်ငန်းလေးတစ်ခု ထူထောင်ဖြစ်ကြသည်။ ဆေးစက်ကျရာ အရုပ်ထင်နေသည့် အချိန်ကာလများတွင် စနေဂြိုဟ်၏ အဆိုးများ တဒင်္ဂ ငုပ်လျှိုးလျက်..။ တကယ်က ကံကြမ္မာသည် လူ့ အရည်အချင်း ဟု တထစ်ချ ယုံကြည်ထားသော ဖေဖေ့ စိတ်ဓာတ်ကို ဘွားလေး ကြောက်ရခြင်းသာ။
ဖေဖေ ပြန်ရောက်လာပြီးသည့်နောက်ပိုင်းနှင့် ဆယ်တန်း အောင်စာရင်း မထွက်မီ ညအထိက ဖွေး၏ ဘ၀တွင် အပျော်ဆုံး အချိန်များ ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဖေဖေ့ လက်မောင်းကို ချိတ်ခိုတွဲရင်း ဘွားလေးကို မထိတထိ အကြည့်များနှင့် ကလိရခြင်းက ဖွေးအတွက် အရသာအရှိဆုံးပင်။ ဖေဖေကတော့ သမီး နှစ်ယောက်လုံးကို တန်းတူ ချစ်ပုံရပါသည်။ အထူးသဖြင့် သူ မရှိခင် အချိန်များက ဘွားလေး အနှိမ်ခံရသော ဖွေးကို ပို၏။ သတ္တိရှိ၍ သွက်လက်ချက်ချာသော ဖွေးကို သားယောင်္ကျားလေး တစ်ဦးလိုပင် ဆက်ဆံသည်။
ဆယ်တန်းအောင်စာရင်း မထွက်မီညက ဖေဖေ အလုပ်ကိစ္စနှင့် နေပြည်တော်တွင် ရောက်နေ၏။ မနက်ဖြန် အောင်စာရင်း ထွက်မည်မို့ ညတွင်းချင်း ပြန်လာရန် ဖွေးတို့ ညီအစ်မ ဖေဖေ့ကို ဖုန်းဆက်မိသည်။ အကယ်၍များ ထိုညက ဖေဖေ့ဆီ မရမက ဖုန်းဆက်ခဲ့မိသူမှာ စနေသမီး နှင်းဖွေးဖွေး မဟုတ်ခဲ့ပါလျှင်….။ နောင်တ အတွေးများ ကြားတွင် ထိုတုန်းက စကားသံများက ဖွေး နားထဲသို့ ပဲ့တင် ထပ်လာပြန်သည်။“နက်ဖြန် အောင်စာရင်း ထွက်မယ်တဲ့.. နင် ရင် မခုန်ဘူးလား ဖွေး..”“အောင်စာရင်း ထွက်တာပဲ ရင်ခုန်ရအောင် ရည်းစားစကား အပြောခံရတာမှ မဟုတ်ဘဲ..”“နင်ကတော့လေ.. ပြောလိုက်ရင် အမြဲ ပျက်ချော်ချော်..”“ဟုတ်ပါပြီ ဗြောက်ချိတ်ရယ်.. နင်ပဲ လေးနက်ပါ.. ငါက နင့်လို စိတ်ဖိစီး မခံနိုင်ဘူး..”“ဖေဖေ့ဆီ ဖုန်းဆက်ရအောင် ဖွေးရယ်.. ဘယ်နေ့ ပြန်လာမလဲလို့လေ..”“ဒီရက်ထဲ ပြန်လာမယ် ပြောထားသားပဲ မွှေးရာ.. နင်ကလည်း..”ဖွေး
စကား မဆုံးမီပင် မွှေးလက်က ဖုန်းကို နှိပ်ပြီး နှင့်ပြီ။ တစ်ဘက်မှ ဖေဖေ ချက်ချင်း ပြန်ထူးပုံရ၏။ ထိုစဉ် အောက်ထပ်မှ ဘွားလေး လှမ်းအော်သံ ကြားလိုက်သည်။ မွှေး အတွက် ဖုန်းလာနေသည် တဲ့။ မနက်အောင်စာရင်း ထွက်မည်မို့ ဘာသာစုံ ဂုဏ်ထူးမျှော်မှန်းထားသူ သင်းသင်းမွှေး ထံသို့ ညနေကတည်းက လာလိုက်ကြသည့် ဖုန်းတွေ။ အိမ်လိုင်းဖုန်းနှင့် ညီအမနှစ်ဦး သုံးရန် ဖေဖေ ၀ယ်ပေးထားသည့် ဟန်းဖုန်းလေးအပြင် မေမေ့ ဖုန်းပါ မနားရ။ ခုလည်း ဖွေးတို့ ဟန်းဖုန်းလေးက ဖေဖေ့ထံ ၀င်နေ၍ တစ်ဦးဦးက လိုင်းကို လှမ်းဆက်ခြင်း ဖြစ်မည်။
မွှေးတစ်ယောက် ဖုန်းလေးကို ဖွေးလက်ထဲ ထိုးထည့်ကာ ချက်ချင်း ထ ထွက်သွားသည်။ လက်မှလည်း ဆက်ပြောရန် လက်ဟန်ခြေဟန် ပြလိုက်သေး၏။ “တော်တော် အရေးကြီးနေတယ်..
မုန်းစရာ ကောင်းလိုက်တာ..” စိတ်မှ ရေရွတ်ရင်း အမဖြစ်သူကို မျက်စောင်း ထိုးမိသည်။ ဖုန်းလေးကို နားမှာ ကပ်လိုက်တော့ တစ်ဘက်မှ ဖေဖေက ပြန်ပြောနေပြီ။“အွန်း.. ဘယ်သူလည်း သမီး.. ဖွေးလား.. မွှေးလား..”“ဖွေးပါ ဖေဖေ..”“အေး.. ပြော သမီး.. ဘာမှာမလဲ..”“ဖေချစ် ဘယ်တော့ ပြန်လာမလဲလို့ပါ..”“ညနေကပဲ အလုပ်တွေ လက်စ သတ်ပြီးတယ် သမီးရဲ့.. မနက် ပြန်ဆင်းလာမယ်လေ..”“နက်ဖြန် သမီးတို့ အောင်စာရင်း ထွက်မယ်တဲ့ ဖေရဲ့.. ခုည ပြန်လာလိုက် ပြီးရော..”“အွန်.. ဟုတ်လား.. ဖေဖေ မနားရတော့ဘူးလား သမီးငယ်ရဲ့..”“အာ.. ဖေချစ်ကလည်း အိမ်ရောက်မှ အတိုးချ နားပေါ့ လို့.. အဆင်ပြေရင် ပြန်လာပါ ဖေရာ နော်..”သည်လို
ဇွတ်တရွတ် ဘာကြောင့် ပြောမိသွားမှန်း ဖွေး မစဉ်းစားတတ်ခဲ့ပါ။ တကယ်တမ်း တွေးကြည့်တော့ ဖွေးက ဆယ်တန်းစာမေးပွဲကို အအိပ် အစား မပျက်ဘဲ ဖြေခဲ့ခြင်းသာ။
ယခုလည်း ဆောက်တည်ရာ မရလောက်အောင် ရင်ခုန်နေသူက မိမိ မဟုတ်။ ဖေဖေ ထံမှ ပြန်လာမည်ဟု ကတိစကား ရသည်အထိ ဖွေး ဂျီကျခဲ့မိသည်။ ဖေဖေ ဖုန်းချသွားတော့မှ အောက်ထပ်သို့ဆင်းကာ မွှေးလက်ထဲသို့ ဖုန်းထည့်ရင်း “အွန့်.. ပြန်လာမယ်တဲ့.. အခု ထွက်လာခဲ့မယ်တဲ့..”။ သူငယ်ချင်းနှင့် ဖုန်းပြောနေသည့် မွှေးက ခေါင်းငြိမ့်ရင်း လက်မ ပြန်ထောင်ပြသည်။ “ဖေဖေလား ဖွေး..” မေမေ မေးလိုက်သော စကားကို ကြားတော့ ဘွားလေးက “မိဖွေးဖွေး.. အလုပ်များတဲ့ ဖအေကို ညချင်း ပြန်လာဘို့ ပူဆာပြန်ပြီလား ဟုတ်လား.. ညည်းကတော့လေ.. တကယ့်ကို မလွယ်ကြောပဲ..” မြည်တွန်တောက်တီးရင်း ကျန်ခဲ့သော ဘွားလေးကို ပုခုံးတချက် တွန့်ပြကာ အပေါ်ထပ်သို့ ပြန်တက်လာခဲ့၏။ တကယ်တမ်း ထိုညက ဖေဖေပြောခဲ့သည့် “အခု
ထွက်လာမယ်..” ဟူသည့် စကားသံသည် ဖွေး ဘ၀အတွက် နောက်ဆုံး ကြားရသည့် ဖေဖေ့ အသံဖြစ်ကြောင်း ကြိုသိခဲ့ပါလျှင်..။ နောက်နေ့ နံနက် အရုံတက်ချိန်တွင် တစ်ရပ်ကွက်လုံးရှိ ဆယ်တန်း ဖြေထားသောကျောင်းသား အားလုံးနီးပါး လမ်းပေါ် ရောက်နေကြပြီ။ အော်ဟစ်ပျော်ရွှင်နေကြသူများ ရှိသလို ခပ်ကုပ်ကုပ် အိမ်ပြန်လာသူများလည်း ရှိသည်ပေါ့လေ။ ဆယ်တန်းအောင်စာရင်းကို မိမိနှင့် မဆိုင်သလို သဘောထားသည့် ဖွေးက အိပ်ရာထဲတွင် ဇိမ်ကျနေဆဲ။ ဖေဖေ့ကို
မျှော်ရင်း တိတ်ဆိတ်နေသည့် ဖွေးတို့ အိမ်သို့ သတင်းနှစ်ခု တပြိုင်နက်ရောက်လာ၏။ သင်းသင်းမွှေးတစ်ယောက် မျှော်မှန်းထားသည့်အတိုင်း ဘာသာစုံ ဂုဏ်ထူးဖြင့် အောင်မြင်ကြောင်း သတင်းကောင်းနှင့်အတူ နေပြည်တော်မှ ရန်ကုန်အပြန်၊ အမြန်လမ်းမကြီး တစ်နေရာတွင် ယာဉ်မတော်တဆမှုကြောင့် ချစ်ရသော ဖေဖေ နေရာတွင်ပင် ပွဲချင်းပြီး ကွယ်လွန်ခဲ့ကြောင်း သတင်းဆိုး…။“ရွှေတောင်ကြီး
ပြိုကျလေသည်..” ဆိုသောစကားကို အကြိမ်ကြိမ် ကြားဖူးသော်လည်း မိမိ ကိုယ်တိုင် ခံစားရမည်ဟု ဖွေး မတွေးခဲ့ဘူးပါ။ ဖေဖေ့သတင်းကို ကြားကြားချင်း သွေးပျက်ထိတ်လန့်ကာ မေ့လဲကျသွားသည့် မေမေ..။ အသံ အကျယ်ကြီးနှင့် အော်ငိုလိုက်သည့် မွှေး..။ မိမိကို စားတော့ ၀ါးတော့မတတ် မျက်လုံးများဖြင့် စိုက်ကြည့်နေသည့် ဘွားလေး..။ အားလုံး အလယ်တွင် အသံတိတ် အံကျိတ်ရင်း ခြေစုံရပ်နေမိသည့် ဖွေး..။ ဖေဖေ့ကားထဲမှ ရခဲ့သည့် ပစ္စည်းများထဲတွင် ဖွေး အကြိုက် နေပြည်တော် ဒေသထွက် သွားရည်စာဖြစ်သော ပဲချောင်းထုပ်လေးများ ပါလာခဲ့သည်။ သည်အိမ်တွင် မည်သူမျှ စားလေ့ မရှိသည့် မုန့်ကလေးများ၊ ဖွေးမှလွဲ၍ မည်သူမျှ မကြိုက်သည့် သည်မုန့်လေးတွေကို ဖွေး တစ်ယောက်တည်းအတွက်
ဖေဖေ သတိတရ ၀ယ်လာခဲ့ရှာသေးသည်။ ပြန်တွေးတိုင်း ကျမိသည့် မျက်ရည်တို့ကို သိမ်းရင်း ရေချိုးခန်းသို့ ၀င်ခဲ့၏။ ဖွေးအတွက် ရင်နာစရာ အတိတ်ကို ထိုင်တွေးကာ ငိုကြွေးနေဘို့ အချိန်မရှိပါ။ မိသားစု၏ ဖိနှိပ်ခံဘ၀ကို ထိုင်နာကျည်းနေဘို့ အချိန်လည်း မရှိပါ။ အားလုံးသော ခံစားချက်တို့ကို မြိုသိပ်ရင်း ဖွေး စိတ်ဓာတ်တို့ အသက်ထက် များစွာ ရင့်ကျက်ခဲ့သည်။ မိမိ ဆန္ဒရှိသည့် အရာမှန်သမျှ အခက်အခဲများကြားမှပင် ရအောင်
လုပ်ယူသည်။ လက်တွေ့အားဖြင့် မရနိုင်လျှင် စိတ်ကူးနှင့် ဖန်တီးခံစားသည်။ အထူးသဖြင့် ဘွားလေး နှိပ်ကွပ်သမျှ မကျေနပ်ချက်များ။ အိမ်တွင် စာကျက်ရန် လာရောက်စုဝေးတတ်သည့် မွှေးသူငယ်ချင်း ဆေးကျောင်းသားများ၏ ခပ်နှိမ်နှိမ် အကြည့်များ။ မိမိအပေါ် ကျွန်တစ်ယောက်ပမာ တရင့်တသီး ဆက်ဆံကြပုံများ။ ထိုပုံစံ
ထို အနေအထားများကို ဖွေး အလွန်မုန်းသည်။ သည့် အတွက် ဖွေး၏ စိတ်ထွက်ပေါက်က စိတ်ကူးယဉ်ခြင်း ဖြစ်လာ၏။ စိတ်ကူးထဲတွင် ငါ့ဘ၀၊ ငါသာ အရှင်သခင်။ ပတ်ဝန်းကျင်မှ လူ အားလုံး (မေမေ မှ လွဲ၍) ဖွေး အလိုရှိရာမှန်သမျှ ဖြည့်ဆည်းရသော၊ ဖွေး စေညွှန်သမျှ နာခံရသော ဖွေး၏ အစေခံများ။ ဖွေး စိတ်တိုင်းမကျလျှင် ဒဏ်ပေးခြင်း ခံရသော အပြစ်သားများ။ တကယ်တမ်း သည်နေ့ အထိတော့ ဖွေး၏ စိတ်ကူးများသည် စိတ်ကူးယဉ်ခြင်း သက်သက်သာ ဖြစ်နေပါသေးသည်။ ရေမိုးချိုး ပြင်ဆင်ပြီး ကျူရှင်သွားရန် ဆင်းလာခဲ့သည်။ ညီအစ်မနှစ်ဦး အနက် အစ်မဖြစ်သူက ဆရာဝန်လောင်းတစ်ဦးမို့ မေမေ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများကို ဆက်လက်ဦးဆောင်ရန် တာဝန်က ဖွေးအပေါ် အလိုလို ကျရောက်လာခဲ့၏။ မိမိကို အထင်မကြီးသော ဘွားလေး ရှေ့တွင် အောင်မြင်သည့် အမျိုးသမီး လူငယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် တစ်ဦးဖြစ်အောင် ကြိုးစားပြရန် ဖွေး ဆုံးဖြတ်ထားသည်။ သည့်အတွက် စီးပွားရေးနှင့် လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ စီမံအုပ်ချုပ်ရေး သင်တန်းများ ဖွေး တက်ဖြစ်၏။ ဘွားလေးကတော့ ငယ်စဉ်ကတည်းက ခပ်ပေါ့ပေါ့ နေခဲ့သည့် စရိုက်ကြောင့် ဖွေး လုပ်နေသမျှသည် အချိန်နှင့် ငွေကို ဖြုန်းတီးခြင်း သက်သက်ဟုသာ စွပ်စွဲလေ့ရှိသည်။ “ဒီနေ့ နည်းနည်း နောက်ကျတယ်နော်..”“အင်း..”တက္ကစီပေါ်မှ
ဆင်းဆင်းချင်း အနားရောက်လာပြီး ခပ်တိုးတိုး နှုတ်ဆက်လိုက်သူက စူးရှ..။ နံမည်ကသာ စူးရှ သော်လည်း လူကဖြင့် ကြည့်လိုက်လျှင် ဘယ်တော့မှ အရောင်မထွက်။ ဖွေး၏ အချစ်ဆုံး သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ မာလာကတော့ “နင့်စိတ်က ထင်နေတာပါဟယ်.. ဒီလောက်ကြီးလည်း မဟုတ်ပါဘူး..” ဟု ပြောသည်။ တကယ်တမ်းအားဖြင့် စူးရှ ဆိုသော ကောင်လေးသည် အရပ် မြင့်မြင့်၊ မဖြူလွန်း မညိုလွန်းသော အသားအရောင်နှင့် ကျစ်လစ်သည့် ကိုယ်နေဟန်ထားတို့ကြောင့် ကြည့်ကောင်းသော ယောင်္ကျားတစ်ယောက်ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ဘာကြောင့်မှန်းမသိ၊ သူ့မျက်နှာပေါ်တွင် တစ်စုံတစ်ခုကို ဆုံးရှုံးထားခြင်း.. ဆုံးရှုံးထားခြင်း ဆိုတာထက် အရှုံးပေး ထားသည့် အရိပ်အရောင်များ ပေါ်နေသလိုလို။ အထူးသဖြင့် ဖွေးကို တွေ့လျှင် ခိုးကြောင်ခိုးဝှက် ကြည့်တတ်သည့် မျက်ဝန်းညိုညိုများ။ ဖွေးဘက်မှ ခပ်တင်းတင်း အကြည့်တို့ဖြင့် တုန့်ပြန်လိုက်တိုင်း ငုပ်လျှိုးဝပ်စင်းသွားသော သူ့မျက်လုံးများကို ဖွေး အသည်းယားလှပါသည်။ ယခုလည်း
ကားပေါ်မှ ဆင်းလာသည့်ဖွေးကို နှုတ်ဆက်ပုံက အတန်းဖော် သူငယ်ချင်း တစ်ဦးနှင့်မတူ။ လုပ်ငန်းခွင်သို့ စစ်ဆေးရန် ရောက်လာသော သူဌေးကို ဦးညွှတ် ကြိုဆိုနေသည့် ဒလ၀မ်ရုပ် ပေါက်နေ၏။ ဒါတောင် ဖွေးက မိမိအတွက်ဆိုလျှင် ဘယ်တော့မှ မအားတတ်သော အိမ်က ကားကို စီးခဲလှသူ။ ဖွံ့ထွား ပြည့်ဖြိုးလှသည့် ကိုယ်နေဟန်ထားကြောင့် ဘတ်စ်ကား တိုးစီးရမှာလည်း အာရုံနောက်မိသဖြင့် ဖွေး ဘယ်သွားသွား တက္ကစီ ကိုသာ အားကိုးရသည်။ စူးရှ က ဖွေးတို့ ကျူရှင်မှ ကွန်ပြူတာသင်တန်းဆရာ၏ တူ ဖြစ်သည်။ ငယ်စဉ်ကတည်းက မိဘများ ဆုံးပါးသည်လား ကွဲနေသည်လား သေသေချာချာ မသိသော်လည်း ဦးလေးအိမ်တွင် နေရင်း ပညာသင်ရသည်မို့ ဘေးလူ၏ မျက်နှာ အရိပ်အချည်ကို သိတတ်လွန်းခြင်းပေလား။ အခြား သူငယ်ချင်းများကိုလည်း အနစ်နာ ခံတတ်သော စူးရှ..။ မိမိကိုတော့ နဲနဲ ပိုသည်ဟု
ဖွေး ခံစားမိသည်။ “မာလာ ရောက်ပြီလား စူးရှ..”“အွန်း.. ဆိုင်ကစောင့်မယ်တဲ့..”“ရော့.. ကိုင်ပေး..”လက်ထဲက
ဖိုင်အိတ်ကို သူ့လက်ထဲ ထိုးထည့်ပေးရင်း ရှေ့မှ ခြေတစ်လှမ်း ကျောကာ လျှောက်လာခဲ့သည်။ ခေါင်းငုံ့၍ ခပ်ကုပ်ကုပ် လိုက်ပါလာသော စူးရှ၊ မိမိ နောက်ပိုင်းအလှကို ခိုးကြည့်နေမှာ မလွဲပေ။ ချစ်သူရည်းစား မထားဘူးသေးလို့ပဲလား.. မိမိပင်ကိုယ်စိတ် ကိုယ်တိုင်က တစ်ဘက်သားအပေါ် ရန်လိုအကျင့် ရှိခြင်းကြောင့်ပဲလား.. မိမိ၏ ရှိုက်ဖိုကြီးငယ်တို့ကို ခေါ်တော တစ်ထောင်အားနှင့် ရှုစားတတ်သည့် ငနဲများကို ဖွေး အလွန်မုန်းသည်။ အလှတော့လည်း
ကြိုက်ပြန်၏။ လှအောင်လည်း ပြင်တတ်ပါ၏။ လှလို့ငေးကြတာကို မသာယာတတ်ဘဲ ဒေါကန်
တတ်သည့် ကိုယ့်စိတ် ကိုယ်လည်း နားမလည်။ သို့သော် စူးရှအပေါ်တွင် သည်လို အမုန်းစိတ်မျိုး မဖြစ်မိ။ သူ ဖွေးကို ခိုးကြည့်တတ်မှန်း သိသိနှင့်ပင် သူကြည့်ချင်အောင် တမင် နေပြမိသည်။ ကိုယ့်အကြောင်းနှင့်ကိုယ် အိမ်မှာ စိတ်တိုလာပြီး သူ့ကို မဆီမဆိုင် အပြစ်ရှာ ရန်လုပ်ရတာကိုလည်း နှစ်သက်မိသလိုပင်။ ကျူရှင်ခန်းရှိရာ တိုက်အောက်မှ ထိုင်နေကျ ကော်ဖီဆိုင်လေး
အရောက်တွင် ကြိုတင်ရောက်နှင့် နေသည့် မာလာက..“ငါတို့က နင် ဒီနေ့ မလာတော့ဘူးတောင် ထင်နေတာ..”“အင်း.. အိမ်မှာ အလုပ်နဲနဲ များနေလို့ နောက်ကျသွားတာ..”“မွှေး လိုက်ပို့တာလား ဖွေး..”“ဟုတ်မယ် အားကြီး.. ငါ့ဘာငါ တက္ကဆီနဲ့လာတာ..” ဖွေးနောက်မှ
ခပ်ခွာခွာ လိုက်လာသည့် စူးရှ.. ဆိုင်ပေါက်ဝတွင် အတန်းထဲမှ ကောင်လေး တစ်ယောက်နှင့် နှုတ်ဆက်နေသေးသည်။ “စူးရှ.. ငါ့ဘို့ Ice coffee သွားယူပေး..” အနားရောက်လာပြီး ထိုင်တောင် မထိုင်ရသေးသည့် သူ့ကို ခပ်တည်တည်နှင့် ပြောလိုက်၏။ အားနာသွားဟန်ရှိသော မာလာက..“နင်ကလည်းဟယ်.. ၀ိတ်တာလာမှာပေါ့.. ဘယ်လိုများဖြစ်နေလဲ..”“၀ိတ်တာလာဘို့.. မှာဘို့.. လာပြန်ပို့တာ စောင့်ဘို့.. အဆင့်က သုံးဆင့်.. စိတ်ရှည်ဘူး..”“မှားပါတယ် သခင်မရယ်.. ဟဲ့ ငါ့စိတ်ထင်လေ.. အဲ့ကောင် နင့်များ ကျိတ်ကြိုက်နေလား မသိဘူး..”“စူးရှ လား..”“အွန်းလေ..”“ဟာဟ.. ကြံကြံဖန်ဖန် မိမာရယ်.. နင်ပဲ တွေး တွေးတတ်တယ်..”“ငါ တကယ်ပြောတာဟ.. နင်မလာခင်ကလေ..”“အင်း ဘာဖြစ်လဲ.. ငါမလာခင်က.. မေးနေတယ်မှတ်လား ငါ့အကြောင်း တချိန်လုံး..”“ခိခိ.. နင်လည်း သူ့ကို စိတ်ထဲရှိနေပုံပဲ ဒါဆို..”“သေလိုက်ပါလား.. ကောင်မနော်..”“ဟဲ့..
ငါ အတည်ပြောတာ ဖွေးရဲ့.. သူ့ပုံစံက အတန်းထဲမှာလည်း အေးအေးဆေးဆေး နေတတ်တယ် ဆိုပေမယ့် နင့်ရှေ့ရောက်ရင် ပိုပြီး ငြိမ်ကုပ်သွားသလိုပဲ.. ငါတို့နှစ်ယောက်ကလွဲပြီး ဘယ်သူနဲ့မှလည်း သိပ်ရောရောနှောနှော မနေဘူးလေ..”“အဲ့တော့ နင့် ကြိုက်နေတာကော မဖြစ်နိုင်ဘူးလား ကဲ..”“သောက်ကောင်မ.. ငါ အကောင်း ပြောနေတာဟာကို..”“ဟားဟား.. ငါ သိပါတယ် မာရယ်.. ကိုယ့်ကို ဘယ်ကောင် ဘာစိတ်ဝင်နေလည်း မရိပ်မိ လောက်အောင် ငါ ငတုံးမှ မဟုတ်ဘဲ..”“ဟီဟိ.. ကောင်မ ပေါ်ပြီ.. ပြောစမ်း အာ့ဆို.. နင့်စိတ်ကကော သူ့အပေါ် ဘယ်လိုရှိလဲ..”“အွမ်းးး.. ငါ့ စိတ်ကလား.. ငါ့ စိတ် က.. ”ဖွေးတစ်ယောက်
မာလာ့ အမေးကို ပြန်ဖြေရန် တွေးတွေးဆဆ ချင့်ချိန်နေစဉ် ကော်ဖီခွက်လေး ကိုင်ထားသော စူးရှ ပြန်ရောက်လာ၏။ ကော်ဖီခွက်ကို ဖွေးရှေ့ ချပေးပြီး မျက်နှာချင်းဆိုင် ခုံတွင် ၀င်ထိုင်သည်။ လက်ထဲတွင်တော့ ဖွေး၏ ဖိုင်အိတ်လေးကို ကိုင်ထားဆဲ။ ဘာစကားမှ မပြောဘဲ ဆိုင်အပြင်ဘက်သို့ ခပ်ငေးငေး
ကြည့်နေသော သူ့ကို မာလာက..“လက်ထဲက အိတ်က ချထားပါ စူးရှရယ်.. နင့် ပုံစံကြည့်ရတာ သတိဆွဲ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ စစ်သား ကျနေတာပဲ..”“အာ နင်ကလဲ..”ရှက်သွားသော
စူးရှတစ်ယောက် အိတ်ကို ခုံပေါ်တင်ရန် ပြင်စဉ်.. “အွမ်းးး ဟွန်းး.. တင် နဲ့.. ကိုင်ထား အိုက်တိုင်း..” ဖွေး ပါးစပ်ထဲမှ ကော်ဖီအေးတစ်ငုံကို အမြန်မြိုချပြီး ပြောလိုက်၏။ တစ်ယောက်ယောက်က ပြောလိုက်တိုင်း ရှက်သလို လန့်သလိုနှင့် ချက်ချင်း ထ လုပ်တတ်သော သူ့ရဲ့ အဲ့လိုပုံစံကိုပဲ ဖွေး အကြောမတည့်ခြင်းပင်။ “ငါ အခု ဒါသောက်ပြီးရင် သွားမှာလေ.. ခဏလေးတောင် ကိုင်မထားနိုင်ရအောင် ငါ့အိတ်က ဘယ်လောက်များ လေးနေလို့လဲ..” ကုပ်ချိချိလိုလို ပြုံးစိစိလိုလို သူ့မျက်နှာကို မျက်စောင်းထိုးရင်း ပြောပစ်လိုက်သည်။ မာလာက စားပွဲအောက်မှနေ၍ ပေါင်ကို လှမ်း ဆိတ်၏။ မာလာ့ကိုပါ
မျက်စောင်း ထိုးပစ်လိုက်သည်။ စူးရှတစ်ယောက် မျက်နှာကို တစ်ဘက်သို့ ခပ်စောင်းစောင်း လှည့်ကာ ပြုံးစိစိ လုပ်နေပြန်သည်။ သူ့ပုံစံက မိမိ စိတ်တိုတာကိုပဲ သဘောကျ နေသလိုလို။ သက်တူရွယ်တူ လူငယ်ချင်းဖြစ်ပြီး အေးတိအေးစက်နှင့် လူကြီးဂိုက် ဖမ်းနေသည့် သူ့ပုံစံက နေရင်းထိုင်ရင်း အော်ချင် ငေါက်ချင်နေသော ဖွေးကို ပို၍ ဆွပေးနေသလိုပင်။“ဘာမှ မစားတော့ဘူးလား ဖွေး.. ငါတို့တောင် အစောလေးကတင် နန်းကြီးသုတ် စားထားပြီးပြီ..” မာလာပြောလိုက်သော စကားကြောင့် စူးရှကို အကြောင်းမရှိ အကြောင်းရှာ ရစ်ချင်နေသည့် ဖွေး စိတ်ကူးတစ်ခု ရသွား၏။“အော..
ငါ့ မစောင့်ဘဲ စားနှင့်တယ်ပေါ့လေ.. ဟုတ်လား.. မာက ထားပါတော့ ဟိုဘက်ကျူရှင်က ကူးလာရတော့ ဆာလို့ စားတယ် ထား.. နင်က ငါ့ ဘာလို့ မစောင့်တာလဲ စူးရှ..”“အာ.. နင် ဒီနေ့ မလာတော့ဘူး ထင်လို့ပါ ဟာ..”“မနေ့က ငါ ပြောခဲ့လို့လား.. ဒီနေ့မလာဘူးလို့..”“ပြောတော့ မပြောခဲ့ဘူးလေ ဖွေးရယ်.. ဒါမယ့် ဒီနေ့မှ ကိစ္စပေါ်လာလို့ မလာဖြစ်တာမျိုးလားပေါ့.. အဲ့လိုပါ..”“မသိဘူးဟာ.. ငါ မကျေနပ်ဘူး..”“အယ်..
နင်ကလည်း ဖွေးရယ်.. နင်မလာတော့ဘူးထင်လို့ သူလည်း မစောင့်တာပါဟယ်.. အတန်းချိန်လည်း နီးနေပြီလေဟာ.. သူ စောင့်မယ်ပြောပါသေးတယ်ဟဲ့.. ငါ စားခိုင်းလို့ပါ..”“ဘာ…”
အပိုင်း ၂ ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါရန် Posted by